သူရဲကောင်းကြီး ဒွန်ကွီးဇုတ် – မောင်အောင်ပွင့်
.စပိန်နိုင်ငံ လာမန်ချာဒေသ ရွာကလေးတရွာက လယ်သမားလူငယ်လေးဟာ(၁၆) ရာစု ရောက်တာတောင်မှ (၁၄) ရာစု သူရဲကောင်းဝါဒ သူ့မှာ ဖိစီးခံနေရတုန်းဒုက္ခရောက်တဲ့ မိန်းမချောလေးတွေကို ကယ်တင်ချင်တယ်ဘီလူးတစ္ဆေတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ချင်တယ်၊ နဂါးဂဠုန်တွေနဲ့ စစ်ခင်းချင်တယ်ချပ်ဝတ် ...
အောင်သာငယ် – အိမ်ပြန်ချင်တယ်
.အဲသည့်လမ်းလေးတဖက်တချက်မှာဖူးပွင့်လန်းဆန်းနေတဲ့ တောပန်းလေးတွေကို တွေ့မိတော့ကျနော်က ရပ်တန့် ငေးမောနေမိသေးတယ်... ကျနော့် မျက်လုံးရှေ့မှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေအေးသွားနေတဲ့ ညနေခင်းကခြေကုန်လက်ပမ်းတွေကျလို့သူ့ အပူအပင်အလုံးစုံကို လျှော့ချသွားပုံရတယ်... လ ...
ဒီလမ်း – နေစိမ့်
.ဒီလမ်းကိုလျှောက်သူမင်း ပထမ မဟုတ်ဘူး။ဒီလမ်းပေါ်မှာချွေးစက်တွေယိုစီး ဆားတွေပွင့်တယ်မကျက်သေးတဲ့ ဒဏ်ရာကသွေးမြေသားကို စွေးစွေးနီစေတယ်ခြေရာအထပ်ထပ်ကမခြောက်သေးတဲ့ အင်္ဂတေမျက်နှာပြင်မှာအသားတံဆိပ် ထွင်းထုထားသလို။ဒီလမ်းပေါ်မှာသမိုင်းကမျက်နှာလွှဲသွားလို့ မရတဲ့အ ...
မောင်လွမ်းဏီ – နွေပေါင်ကျိုး
.ပိတောက်ပွင့်လည်းတမွန်းတည့်မွှေး။ခတ္တာဥကလည်းရာသီဥတု ကွဲရှမျက်နှာပူရ ခက်သားကလား။ပန်းတမျိုး ကျန်သေးတယ်စိုက်မလို့ခေတ်နဲ့ ချစ်သူက ကြိုက် မကြိုက် ဂရုမစိုက်ချင်တော့ဘူးလေဆူးတွေနဲ့ ပန်းတွေကိုသစ်ခုတ်သမားတွေပဲ ထွေးပိုက်တယ်။မိုက်ခေတ်ကုန်ပြီ ဆိုလား။အသက်တွေ ကြ ...
ထာဝစဉ်အဝေး – ခင်မင်းဇော်
.စိတ်စေစားရာအတိုင်းဖျတ်ကနဲ ဖျတ်ကနဲ ခြေလှမ်းတွေထဲမင်းဆီအရောက်သွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ်။ဝေးခဲ့ကြတယ်ရှင်သန်ရာ ဘဝချင်း ကျင်လည်ရာ ဝန်းကျင်ချင်းယုံကြည်စေစားရာ ပန်းတိုင်ချင်းအားလုံးက ဝေးသထက်ဝေးခဲ့ကြပါတယ်။မင်းချစ်ခြင်းထဲ ကိုယ်ကျွံနစ်ကိုယ့်ချစ် ...
လိပ်ပြာလောဂျစ် – နှင်းခါးမိုး
.ယုံကြည်မှုမှာ နှင်းဆီပန်းတွေ ဝေဖူးတယ်ချစ်ရခြင်းမှာ စစ်ပွဲများစွာ တိုက်ဖူးတယ်ငယ်ဘဝမှာ စက်ဘီးကလေး လဲဖူးတယ်ကံတရားမှာ အပြန်လက်မှတ် ပျောက်ဖူးတယ်လူ့အဖြစ်မှာ မြစ်ဆိပ်ညနေ ငေးဖူးတယ်ဘဝက တရားပဲစားပွဲပေါ်က သပြေကိုင်းကလေးပန်းအယောင်ဆောင်ပြီး လရောင်ကို ခိုးနမ်း ...
နေလွဏ်းအိမ် – ဆုတောင်းခန်း
.​ဝေးလွင့်​ခြင်း​တွေ အ​တောင်​​ပေါက်​တဲ့အခါ​မျှော်​လင့်​ချက်​ဟာ ရိသဲ့သဲ့ပြုံးပြတယ်​အပန်း​တကြီးနဲ့ လက်ယက်​​ခေါ်မိ​တော့​လေယာဉ်​ပျံဟာ တိမ်​ထဲတိုးတိုးဝင်​ကိုယ့်​နှုတ်​ခမ်းကိုယ် ​ပြန်​ကိုက်​​နေရတာ​လောက်​ရင်​နင့်​စရာမရှိခဲ့ဘူး“အ​မေ”လို့ ဟစ်​​အော်​ပြီးက ...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ – မြေပုံတက်တူး
.သူမရဲ့ ​ကျော​ပေါ်မှာ လှပတဲ့ စကားဝှက်​​ ရှိတယ်​​တောင်​တက်​တိုင်း ​တောင်​​ပေါ်က ပြန်​ဆင်းပြီးတိုင်းဘုရား​ကျောင်းကန်​ အရိပ်​ဟာ ​ပျောက်​​ပျောက်​သွားလူ​တွေဟာ ကျိန်​စာတိုက်​ခံကြရတယ်​ ချယ်​ရီ ၊ စ​တော်​ဘယ်​ရီ ၊ စပျစ်​ဝိုင်​​တော​များ ရုန်းကြွလာကြတဲ့ ...
ရပ် – ဖုန်းမောင်
.ရပ် ရပ် ရပ်ဟော့ဒီမှာ မီးပွိုင့်က ပြတဲ့တရားအစိမ်းရောင်ဆိုရင် ဖြတ်သန်းသွားလာအဝါရောင်ဆိုရင် စောင့်ဆိုင်းဦးအနီရောင်ဆိုရင် လုံးဝ လုံးဝ မဖြတ်သန်းရတော့ဘူး။ရပ် ရပ်ရပ်အနီရောင်အဆင့်မို့ ရပ်ပါလို့ အားလုံး တားနေတာလူကူးမျဉ်းကျားမှာ လူတွေ ကူးနေတာမင်းက ဘာဖြစ် ...
ရွာမင်္ဂလာဆောင် – လျှမ်းအောင်
.လူစိမ်းမရှိတာ ပြဿနာမရှိဘူးအသားစိမ်းမရှိတာ ပြဿနာရှိတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့" ဒီဂျေတီးလုံး"ဟာဘီယာပုလင်းတွေကို ကခုန်စေလို့ ။တားထားတဲ့ ရွှေဆွဲကြိုးတွေသတ်ို့ သား လည်းပင်းကို စွပ်မယ့်ကြိုးကွင်း။ဝတ္ထုငွေက တသောင်းခွဲ ကျပ်ထဲပါကြံဖန် ကုသိုလ်ယူတတ်ဖို့ ကဝက်နှစ်ကောင် ...
ငါတို့ ဘယ်​လို​နေ​သေးလဲ – မိုးဦး​​ဆွေညိန်း
.​ရောဂါပဲဘယ်​​တော့မှ အမျှင်​ပြတ်​တယ်​ မရှိတ​ခုခု ဝင်​​ဆောင့်​​နေတာအစိုးရနဲ့ ပြည်​သူဆိုတာထာဝရ ရန်​သူ​ပေါ့တ​စောင်း​စေးနဲ့ မျက်​​ချေးအလိုမပြည့်​မှု​တွေက ဒိုးယို​ပေါက်​ငါတ်ို့ဟာအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ အမြဲပဲ ပျားတုပ်​ခံရဒုက္ခ​ရေစီး​ကြောင်းဟာဘယ်​​တော့မှ မခမ် ...
ငါ့မြို့ (၅) – နရီမင်း
. (၅) ခုနက ငါ့ကျောင်းအကြောင်း ပြန်ပြောရရင်ငါ့ကျောင်းဟာမြန်မာပြည်မှာ နေရှင်နယ်ကျောင်းရယ်လို့နှစ်ကျောင်းတည်း ကျန်တဲ့ထဲက တကျောင်းပေါ့။ဒီတော့လည်း အမျိုးသားနေ့ ပွဲ​တော်​တွေခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပတယ်အမျိုးသားနေ့ နေ့ဘက်မှာဆိုဒိုးပတ်​ဝိုင်းတွေနဲ့ ကျောင် ...
ငါး (၂) – မိုနေးသစ်
.(၂)အလေးချိန် မပြည့်ခဲ့တာကြာပြီအစာရေစာ မဝလို့ခေါင်းကြီးပြီး ကိုယ်သေးနေတဲ့ငါးမွေးကန်ထဲကသက်တမ်းရင့်နေတဲ့ ငါးတွေ။အကြေးခွံတွေကို ပိုးစားသွားခဲ့ပြီရွှံ့ရေညစ်ညစ်ထဲ အပျော်လွန်မိလို့ငါးရံ့လား ငါးလား မသိတော့တဲ့ငါးတွေ များများလာတယ်။ပုစွန်ဆိတ် ခေါင်းတွေပဲချ ...
မန္တလေး (၁၀) – သော်တာစံ(ကလေး)
.​ပြောပြန်​ရင်​လည်းပက်​လက်​လှန်​ တံ​တွေး​ထွေးသလိုမ​ပြောပြန်​ရင်​လည်းကိုယ့်​​ပေါင်​ သူများ လှန်​​ထောင်းသလိုအ​ပြောနဲ့ မလုပ်​ကြဘဲအလုပ်​နဲ့ ​ပြောကြစို့နဂါးကြီးက ဇိမ်​နဲ့နှပ်​​နေလည်း​အောက်​ကျ​နောက်​ကျမခံတဲ့ စိတ်​ဘ၀င်​နဲ့ငါတို့က သက်​၀င်​လှုပ်​ရှား​ ...
မင်းမျိုးအောင်စံ – အခါတပါး၌ …
.အခါတပါး၌ …– ကဗျာ သင် ဘယ်ကလာခဲ့သလဲ ?– မသိပါ။– သင် ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ ?– မသိပါ။– သင် မသိဘူးလား ?– သိပါ၏။– သင် သိရဲ့လား ?– မသိပါ။မင်းမျိုးအောင်စံ ...
ဘာမှမပြောဘဲ ထိုင်နေတာမကောင်းဘူးလား – တိုးနှောင်မိုး
.ကော်ဖီဟာ ကော်ဖီပန်းကန်ကို ငေးလို့ အိပ်မက်တွေ အတောင့်လိုက်ပြိုကျလာတယ်စိတ်ညစ်တိုင်း ဂစ်တာတီးလို့ ရမလားဖုန်းမျက်နှာပြင်က ကျကွဲသွားတဲ့အတိုင်းမီးဟာ တစ်အိမ်ဝင်တစ်အိမ်ထွက်အပူဟာ မိုးမရွာခင်ပျက်တဲ့မီးထဲ ပါမသွားဘူးစစ်ပြေးပြည်သူတွေ ဆာလောင်နေကြတယ်ဟော်တယ်အရ ...
တလက်လက်အသံ ၂ – မိုးသက်ငြိမ်ဦး
.အသံတွေဟာ အတွင်းကလာတယ်အသဲစွဲအောင်လဲ ချစ်တတ်ပြီးပြီ နှစ်ပေါင်းများစွာအကွဲအပြဲမှာလဲ ကျင့်သားရနေပြီ မြည်သံစွဲနေတဲ့ ထူးမခြားနားဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာ ဂါထာတစ်ပုဒ်လို သီဆိုနေသူတို့ပန်ဒိုရာအိုးကိုလဲဖွင့်ခဲ့ပြီးပြီ နောက်တစ်ခါ အိပ်မက်အသေတွေကိုလဲ အသက်သွင်းခဲ့ပြီြး ...
စစ်​ဟာ တဆစ်​ဆစ်​နဲ့ – ယံဇငြိဏ်း
.(၁)မီး​တောက်​​တွေ ကိုင်းညွှတ်​သီး​နေတဲ့နံရံကို ​ခေါင်းနဲ့တိုက်​ရသလိုဆံသား​တွေ ဦး​ရေပြား​တွေ စိတ်​​တွေ ဘဝ​တွေ ​လောင်​တိုက်​ထဲထည့်​ပြီးအက်​ဆစ်​ပြင်း​တွေ ​ပျော်​ရွှင်​မှုကိုစားသွားကြငယ်​ဘဝ​တွေ အိပဲ့ကျသွားချစ်​ခြင်း​မေတ္တာဟာ ကျည်​ဆံ​တွေ​ပေါ် အနည်​ကျ ...
စစ်​ဒဏ်​ရာ – ​နွေလင်းသစ်(စစ်​ကိုင်း)
.ပစ်​​နေတဲ့ ဒဏ်​ရာဟာတစစ်​စစ်​နဲ့ ကိုက်​ခဲလာတယ်​​ရောဂါဟာတ​ဖြေး​ဖြေးနဲ့ ဝင်းမှည့်​ခဲ့ပြီးအသားစ​တွေလည်း ဖဲ့ထုတ်​ပစ်​​နေရတယ်​အနာစတွေလည်း ဖဲ့ထုတ်​ပစ်​​နေရတယ်​အပုပ်​နံ့​တွေက တ​ထောင်း​ထောင်းထလို့ယမ်း​ငွေ့​တွေ ကင်း​​စင်သွား​အောင်​ငါ​ တောင်းဆိုလိ ...
ထီးယူမလာတဲ့ စစ် – လင်းသစ္စာဦး
.ခုထိတော့ပြောင်းလဲပါပြီ ဆိုတဲ့ရထားကြီးပေါ်မှာတစ်နေရာက တစ်နေရာပြောင်းပြောင်းစီးလို့ . . .ထီးယူမလာတဲ့ စစ်က စတော့မိုးယူလာတဲ့ မိုးကာနဲ့ကာလည်းစင်စစ်တော့ ရွှဲရွှဲ စိုတာပဲ. . .ဒီမှာ တနင်္လာနေ့ လေးသွေးသံရဲရဲနဲ့ လဲနေသူ ထူပေးပါ ကိုအသံကျယ်ကျယ်နဲ့အော်နေ ...
အပြာရောင်အတုများ – စိုးလူမောင်
.* သံစုံတီးဝိုင်းနဲ့ မီးရထား မီး မီးရထားထွက်လာနေတာပါ။*ရထားဟာ အဆံမပါဘူး အသံပဲပါတယ် ရထားဟာ အသံထက်မြန်တဲ့ ရထားမဟုတ်ပေမဲ့ ကျည်ဆံမျိုး စုံသာ တင်လာ။* ရထားမှာ သံလွင်သစ်ခက်နဲ့ သံချိုချိုးငှက်တွေမပါဘူး ဝံပုလွေနဲ့မြေခွေးတွေပဲပါတယ်။* ရထားဟာ မြောက်ဘက်မြစ်ဖ ...
ဒီကနေ့ပျော်မိတယ်”ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ပြောဟန်ကျုပ်မထောက်ခံဘူး” – နေရိုင်း
.ဒီကနေ့ပျော်မိတယ်အသည်းကွဲလူတစ်ယောက်အကြောင်းနောက်ထပ်မရှိတော့တဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ပျော်မိတယ်ဘာပဲပြောပြောငါ့ရှေ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကယင်ကောင်တလောင်းလောင်းနဲ့ ဈာပနပွဲချနေပုံ။ဂဃနဏ မတွေးခေါ်ဘူးတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့မေတ္တာသုတ်ရွတ်ရတာလဲငါတို့အတ ...
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အကျဉ်းချခံလိုက်ရတယ် -နေချိုသွေး
.မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ထိပ်တိုက်တရားစွဲလို့ရအောင်ဘယ်ဘုရားသခင်မှ မတတ်နိုင်ရင်တောင်အမှန်တရားအတွက် ကဗျာတွေကို ရှေ့ ဆက် ရွတ်မယ်။စစ်ပွဲတွေရပ်လို့ တောင်းခဲ့တဲ့နေ့ကငြိမ်းချမ်းရေးပေးလို့ တောင်းဆို မေတ္တာပို့ခဲ့တဲ့နေ့ကအာဏာလက်ကိုင်ထားသူ လူကြီးမင်းအပေါင်းတို့ ...
“ စစ် ” – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.သေနတ်ထဲက ကျည်ဆံနဲ့ ပစ်တာပဲမသေပဲ ရှိပါ့မလား။ပန်းနဲ့ပေါက်တာမှ မဟုတ်ပဲမနာပဲ ရှိပါမလား။ငြိမ်းချမ်းရေးဟာအသံကြောင့် ဖားသေဖြစ်ခဲ့ရ။သုတလင်း (ဆင်ပေါင်ဝဲ) ...
လိုင်ဇာမှသည် ဂါဇာဆီသို့ – စိုးခိုင်ညိန်း
.သေနတ်သံလေးနဲ့မှ အိပ်ပျော်တယ်တဲ့တနှစ်သားရွ ယ်ကလေးငယ်လေးကညည တချက်တချက် လက်လက်သွားတဲ့ကောင်းကင်က မီးပွင့်က ကြည့်လို့လှသတဲ့ပြိုကျနေတဲ့ တိုက်ပျက် အုတ်ပုံတွေကြားစစ်တိုက်တမ်းဆော့ကစားရတာ ပျော်စရာပဲဖယောင်တိုင်းမီးလေးနဲ့ စာရွက်အလွတ်ပေါ်သေနတ်ပုံလှလှလေး ရေးဆ ...
လူအကြောင်း – မျိုးတေဇာမောင်
.ကျူးကျော်လာတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေ ရောက်မလာခင်ထိ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကြမယ်ဂြိုဟ်သားတွေ ရောက်လာတဲ့အခါညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကြအောင်ပွဲခံ ဇာတ်သိမ်းခန်း အပြီးဒီကမ္ဘာမှာ လူလူချင်းတိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေ ဆက်နေတုန်းပဲ။လွတ်လပ်ရေးနေ့ အပိုင်း ၁ နဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ ...
ဘဝအဓိပ္ပာယ် ဝါကျများ – လှိုင်းထက်
.အလွမ်း အဆိပ် ထမင်းအိုး​​​ပေါ်မှာ မိုးစွေခဲ့တယ်မေ့ဆေး မေးခွန်းအောက်မေ့ဖွယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လူပြိန်းကြိုက်တီးလုံးငါတို့ဟာ Z မျိုးဆက်တွေမင်းသားကြီးလျှောက်နေတဲ့လမ်းဖြစ်စဉ်များအမြင်များယမ်းငွေ့တွေ ပြယ်ပြီလားငြိမ်းချမ်းရေးသစ်ပင် အတုကတိစကားပေါ်က ကတိစကားမျ ...
ငြိမ်းချမ်း​ရေး – ရွှေဘ(ငါန်းဇွန်)
.အိုးမဲသုတ်​ထားတဲ့ မှားယွင်းခြင်းဘက်﻿လိုက်﻿သတင်းများညီအစ်​က်ိုချင်း ပစ်​ခဲ့ကြပြီးပြီ။အခန်းကျယ်​ကြီးထဲမှာတပြုံးပြုံးနဲ့ လက်​ဆွဲနှုတ်​ဆက်​လျက်﻿။​တောနက်​ကြီးက တအုန်းအုန်းနဲ့အသက်​ ဖက်​နဲ့ထုပ်​လျက်​။​အနာဂတ်​က​ခေါင်း​လောင်းသံ ဆာ​နေကြတဲ့က​လေးငယ် ...
ကဗျာ (သို့) ငြိမ်းချမ်းရေး – ညီမှူးအိမ်
.ကဗျာ ရေးသားသူရွတ်ဆိုသူဟာလူထဲကလူသားစစ်စစ်တစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်။စစ်ကို မုန်းသူရန်ပွဲတွေကို မနှစ်မြို့သူအတ္တတွေကို ရွံရှာသူသူဟာ ကဗျာဆရာသူဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားကျည်ဆံတွေအစားပန်းတွေကို ပွင့်စေချင်ခဲ့သူ။ရန်သူတွေရှိတဲ့နေရာမိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့နေရာသူဟာ ကဗျာတွေရွတ ...
လူမှန်ရင် ကြားနိုင်ပါစေ – ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ)
.ကလေးငိုသံကြားရင်သေနတ်နဲ့ လိုက်ပစ်မှာစိုးလို့ဘာမီတွန် နေ့တိုင်းတိုက်သုံးလလောက် ပုန်းလိုက်ပြေးလိုက်နောက်တော့ ကလေးလေးက ဖျော့တော့သေးငယ် မလှုပ်မရှက်ဖြစ်ရရှာ။ချောင်းဘေးမှာလွတ်အောင်မပြေးသာတော့တွေ့ရာ လျှိုထဲဝင်ပုန်းအသံကြားရင်သေနတ်နဲ့ လိုက်ပစ်မှာစိုးလို ...
ပြန်ဆိုတေးသံသရာ – အံ့ဘွယ်ဟိန်း
.* ခေတ်ဦးတည့်ရာ သွားနေသလားစစ်ဦးတည့်ရာ သွားနေသလား ။* ခေတ်ဘေးဒုက္ခသည်လည်း ဖြစ်ခဲ့သလိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီ ။* နားထောင်စမ်း ဟေ့ !!!!!ခေတ်ထဲ လမ်းမှားဝင်လာတာ ဘယ်သူတွေလဲ ။* သုံးဆယ့်တစ်ဘုံထဲ လူသတ္တဝါတွေသုံးဆယ့်တစ်ဘုံဘုရားများနဲ့တဝဲဝဲလည် ဘယ်ဘုရား ...
သက်တမ်းမပြည့်သေးတဲ့ စစ် – ဧညိမ်းဝေ
.အသက်ကိုမျှားတဲ့ပွဲမှာ တဖက် ဘယ်နှပိဿာနဲ့အကုသိုလ်က ပါခဲ့ပြီလဲခလုတ်တချက်နဲ့အသက်တပင်ကဘယ်လောက်တောင် ယူငင်ရတာလွယ်လဲတိုတောင်းတဲ့ဘဝကိုပြောင်းဝက ဖူးဖူးမှုတ်ထားတယ်ဒုက္ခကို ထမင်းလုံးစီသမျှငရဲက ဝမ်းသာအားရပေါ့တဖက်တချက်နဲ့ အသက်တွေပြိုင်တူထွက်နေတာ မြင်မကောင်းဘူ ...
ကမ္ဘာမကြေ – ဧညိမ်းဝေ
.ကဗျာလမ်းကထောင်နှုတ်ခမ်းဝကို လျှောက်ရမလိုကဗျာစာသားကထောင်ဗူးဝမှာ နားရမလိုကဗျာဆရာ ကလောင်လက်သံတိုင်တွေပဲ ဖက်ရမလိုနဲ့ကဗျာ မကြေရင်ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းတွေ ဆက်ရှင်နေမှာပဲ။ဧညိမ်းဝေCredit @ https://www.facebook.com/thinkha.lu ...
စစ်(၂) – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.စစ်ကိုဘယ်သူမှ သွားမနှိုးဘူးသူ့ဘာသာ နိုးလာတာဗိုက်ဆာလို့။စစ်ကိုမွေးထားတဲ့ စစ်သခင်တွေကဗိုက်ဆာနေတဲ့စစ်ကို ကျွေးလိုက်တယ်စစ်သား နည်းနည်းပြည်သူ နည်းနည်း။ဗိုက်ပြည့်တော့စစ်ဟာပြန်အိပ်သွားတယ်မြန်မာ စစ်မွေးမြူရေးခြံကြီးရဲ့တနေရာမှာ။ ။ ...
ပြည်တွင်းစစ် – နရီမင်း
.“ကျုပ်တို့ ဒီမှာ ရလိုက်တာကတော့ ဆက်သွယ်လို့ မရတာပဲ။တချို့လူတွေဆီ ခင်​ဗျား ရောက်တောင် မရောက်နိုင်ဒါ​ကြောင့်​ လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ကျုပ်တို့ ဒီမှာ ရှိခဲ့တာပဲ ခင်​ဗျား ရတယ်ဒါ သူ ဖြစ်စေချင်တဲ့ လမ်းပဲဟုတ်ပြီ၊ သူ ရသွားတယ်မဟုတ်​ဘူး၊ ဒါကို ခင်​ဗျားတို ...
ကဗျာရွတ်ခြင်း – မောင်ကြူးရင့်
.ကဗျာရွတ်တာဟာအကြမ်းဖက်တာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နီရူဒါလည်းကဗျာရွတ်ခဲ့တာပဲအမှန်တရားအတွက်ယက်ဗ်တူရှင်ကိုလည်းကဗျာရွတ်ခဲ့တာပဲငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်ကဗျာရွတ်ရမှာပဲကဗျာရွတ်လို့ကဗျာဆရာကို ထောင်ချလို့ရပေမယ့်ကဗျာကို ထောင်ချလို့မရဘူးအမှန်တရားကို ...
ဒီကဗျာကို ငါ လက်​ထိပ်​တန်းလန်းနဲ့ ​ရေးတယ် – မိုး​ကျော်​​ဌေး
.အ​မြောက်​ကျည်​ဆံကို လျှာနဲ့ ဝိုင်းလျက်​​နေကြတာကGroup sex ဇာတ်​၀င်​ခန်းထဲကလို​ဘောင်းဘီ​တွေကို ​ဗြောင်​ချွတ်​ တိတ်​တိတ်​​လေး ပြန်​၀တ်​​ဗြောင် ​ပြန်​၀တ်​ တိတ်​တိတ်​​လေး ပြန်​ချွတ်​သေမှ အာသာ​ပြေမဲ့ ရမ္မက်​ဆန္ဒ​တွေနဲ့သူတို့ လျှာပြားကြီး​တွေကို ဆန်​ ...
ကလင့် ငါ့ကို ပေးမအိပ်ဘူး – မောင်ရင်ဆု
.ကလင့်က ကဗျာဆရာငါ့ထက် ငယ်ကောင်းငယ်မှာငယ်တယ်ကြီးတယ်ရယ်က အရာမဟုတ်ခေတ်ပြိုင်ထဲ ငါတို့အတူတူခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာကလင့်က ကဗျာဆရာလက်နက်ကိုင်ပြီး စစ်တိုက်တာကဗျာဆရာ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးခေတ်မကောင်းရင်ခေတ်ပြောင်းအောင်လို့အနုပညာမြောက်အတိုက်အခံပြောတာကဗျာဆရာတို့ရှေ့မှာ ...
ငြိမ်းချမ်းရေး – ကိုဇော်(ကလေးမြို့)
.၁။ပြည်တွင်းစစ်ကဆွဲနှစ်သတ်ထားတဲ့ ချိုးဖြူငှက်ဟာဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဘယ်ပြာပုံက ဖီးနစ်လိုရှင်ပြန်ထမြောက်ပါ့။ရာစုနှစ် တဝက်ကျော်ကြာကမ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘာမှာ အရှည်ဆုံးမီးတောက်တွေမငြိမ်းသမျှ ဘယ်သူတွေချမ်းသာ။နေပူမှာ လှန်းထားရင်းမီးပြင်းဟပ်တဲ့ငါတို့ အဝတ်တွေမှာအနာဂ ...
ငါတို့နမ်းရှိုက်ချင်သော ပန်းတပွင့်အကြောင်း – သူ့ထက်ကဲ(မန်း)
.အဲ့ဒီပန်းကလေးဟာမထူး ဇာတ် ခင်း ပြီး အိပ်နေတယ်ဘယ် မြေသြဇာအစပ်အဆက်နဲ့ ငါတို့ လွတ် လွတ် လပ် လပ်ဘယ်သေနတ်နဲ့မှပွင့်ချပ်တွေ အောင်သံလွှင့်ရပါ့။ကောင်းလိုက်တဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာအလင်းရောင်မဲ့ သေတ္တာထဲမှာတော့အဆုပ်လိုက် အခိုင်လိုက်ဖူးလို့…… ပွင့်လို့……လိမ်လိမ်ပြီးေ...
​သေနတ်​ထမ်းထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ – ​နေလွဏ်းအိမ်​
.စစ်​က တဆစ်​ဆစ်​မြည်​ပြီးဝင်​​ရောက်​လာခဲ့က​လေးဘဝက တစ်​ - ​နေရာယူနှစ်​ - ကျည်​ဆံ​ထည့်​လိုစစ်​​ဆေး​ရေးလုပ်​​နေမယ့်​ စစ်​မဟုတ်​ဘူးမီး​တောက်​​တွေလျံတက်​​နေတဲ့စစ်​သစ်​ပင်​တစ်​ခုလုံးကိုဖြိုလှဲမယ့်​စစ်​​မေတ္တာတရား​တွေ ​မှောက်​လျှက်​ကျ​နေတဲ့စစ်​စစ်​ကစစ်​ ...
ငရဲ – ဟာရှိန်း(မင်းတပ်)
.ရွာနေတဲ့မျက်ရည်နဲ့ပဲငါတို့ကိုယ်ပေါ်က သွေးတွေကိုဆေးဆေးချနေရမျက်ရည်တွေသွေးတွေလူးနေတဲ့ ခန္ဓာမှာအလံတော်ဟာ ပျော်ရွှင်ပါရဲ့လား။သောက်ခလုတ်ကို ဆွဲဆွဲညှစ်နေတဲ့ လက်မှာနတ်ဆိုးရဲ့အမိန့်ပေးသံအကြောအမျှင်တွေ လန့်လန့်ခုန်နေကျည်ဆံဟာ လာရာလမ်းဆီပြန်လှည့်ဖို့ဆုတောင်း ...
မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ စာချုပ် – သင်းရည်လွင်
.သူတလူ ငါတမင်းစာချုပ် သက်တမ်းမပြည့်သေးဘူးသွေးတောင်းတိုင်း မင်းက ဒီ အင်္ကျီကိုဝတ်တယ်ကျောမှာ စစ်ပွဲတွေ ပိုးထားရင်းအာဖရိကမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆားဗီးယားမှာငြိမ်းချမ်းရေးကမ္ဘာမှာငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ပွဲ ရုပ်ရှင် ရိုက်ပြီဆိုမှတော့မင်းလည်း သေနိုင်တယ်ကျည်လမ်ြးေ ...
ပါးထက်က မျက်ရည်ပြာနု – မောင်လွမ်းဏီ
..နွမ်းလျလမ်းကအေးမြခြင်း ဆူးခင်းလယ်ပြင်ကိုး။တို့တွေကဒစ္စနေအပြာကို သေချာ မမြင်ဘူးပေမဲ့ပီကာဆို ဆိုတဲ့ ပန်းချီဆွဲသူရဲ့ချိုးငှက်ဖြူလေးကို ရင်မှာဆေးမင်ရည် စုတ်ထိုးထားကြတာနိုင်ငံတကာ လွတ်လပ်ပျံသန်းခြင်း ကဗျာစာရွက်။စစ်မက်တွေ ရပ်ဖို့ ငါတို့ ကဗျာတွေ ရေးက ...
ပြည်တွင်းစစ် – လင်းနွေးအိမ်
ရင်ငွေ့ပျောက်နေတဲ့ သားများ – ဏီမိုးဝေ
.မသေချာခြင်းများတဲ့မသေချာခြင်းနေ့စွဲတွေထဲမသေချာစွာအသက်ရှင်နေရတယ်။အသက်ရှင်နေပေမယ့်ဘဝတွေသေနေကြတော့မျှော်လင့်မှုငွေ့ငွေ့လေးတောင်မမျှော်လင့်ရဲကြဘူး။အတိတ်ကဘာလဲပစ္စုပ္ပန်ကဘာလဲအနာဂတ်ကဘာလဲကိုယ့်ခြေလှမ်းကို ကိုယ်တိုင်နောက်ပြန်မကြည့်ရဲမနက်ဖြန်ညနက်နက်ထဲတိုးတိ ...
ကျနော့်ကိုဖမ်းပါ – ဖိုး​ရွှေညီမှိုင်း
.ကစားပွဲကြီးက ကြီးလွန်း​တော့ ​နောက်​မှာဘာ​တွေရှိ​နေလဲ မမြင်​ရ ​ရှေ့မှာ​ကတော့နာကျင်​မှု မျက်​ရည်​ ​သွေး အသက်​နဲ့ဘဝ​တွေအားလုံး ပြာပုံထဲကျ။ဒီ ပွဲကြီးကို သားတို့ မကြိုက်​ဘူး အ​မေမ​ဆော့ချင်​ဘူး သူတို့​ဆော့​နေတာလည်းမကြည့်​ချင်​​တော့ဘူး။​လောင်း​ကြေး​ ...
ပုံပြင်ကလေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ် – မောင်မော်ကွန်း
.အတိတ်ကတောင် မြောက် ဗီယက်ကောင်းတွေထောင်းလမောင်းထ မွမွကြေတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေချိန်ငါတို့နိုင်ငံမှာကဗျာတိုလေး ကောက်ရေးမိတာနဲ့သားမယားကွဲ အိုးအိမ်ကွဲအကျဉ်းစံဘဝနဲ့ပဲ အသက်စတေးခဲ့ရသတဲ့ … … ။အရှေ့အနောက် ဂျာမနီ အကြားဘာလင်တံတိုင်း ပြိုကျသွားခဲ့တ ...
ထောင်တန်တဲ့ ကဗျာ – ညီဆောင်းဦး
.ပြည်သူတွေကို နင်းထားတဲ့ စစ်ဖိနပ်လက်သန်းတွေနဲ့ ကလော်ထုတ်ခဲ့တာကဗျာတွေလည်းပါတယ်။ပြည်သူ့အစိုးရတဲ့ဝန်းကြီးဌာနတွေမှာလည်း ကဗျာရှင်တွေရှိရဲ့ခါးတောင်းတခြား တင်တခြားနဲ့တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းတော့—–!ကျည်ဆန်တတောင့်နဲ့ လူ့အသက်တချောင်းတန်ဖိုးချင်းညီလာတယ်။သက်င ...
မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်) – လှောင်အိမ်ထဲက ကဗျာငှက်
.ဘာလဲဟဲ့ ဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာ ရွတ်ရင် ထောင်ကျတဲ့ ခေတ်....။ချိုးငှက်ကလေးရေမင်း ထ မပျံခင်ကဗျာ ရေတိမ် နစ်ခဲ့ပြီ...။ကဗျာလူသားနှောင်ဖွဲ့ ခံရပြီဒီမိုကရေစီ ငြိမ်းချမ်းပါစေ...။ ။ငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာ ရွတ်လို့ အကျဉ်းစံရတဲ့ သူငယ်ချင်းကဗ ...
ထက်​ခြမ်းကွဲ ​လှေက​လေး – မိုး​ကျော်​​ဌေး
.နာဂစ်မုန်တိုင်း(၁ဝ)နှစ်ပြည့် [ကဗျာရှည်] (နိဒါန်း) ဆို့ဆို့နင့်​နင့်​ လွမ်းတယ်​အ​မေ…ဠင်းတငှက်​​တွေ မြူးတဲ့မနက်​မှာအ​မေ​ပျောက်​ရှာတဲ့ သားတ​​ယောက်​ရှိခဲ့တာအ​မေသိပါရဲ့လား…၊ကမ္ဘာ့ စစ်​​မြေပြင်​ အားလုံးရဲ့အဆုံးသတ်​​နေရာလား အ​မေ…အ​လောင်း​ကောင်ေ ...
ညီဆောင်းဦး – မတွေ့ချင်တဲ့ စာမျက်နှာ
.မေလရဲ့အဲ့ဒီညကမြန်မာပြည်ဟာ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်နဲ့တူတယ်မိစ္ဆာတွေယူလာတဲ့မုန်တိုင်းလက်ဆောင်ရက်စက်မှုတွေ ဓါပနာထားတော့စာသင်ကျောင်းတွေသေတယ်လယ်ကွင်းပြင်တွေသေတယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးသေတယ်ဧရာဝတီကြီးလည်းသေတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံကျော်အနု ...
ကွေ့ချလိုက်တဲ့မြစ်တစင်းပေါ်က သက်သေခံပစ္စည်းများ – ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ)
.“မျက်ရည်နဲ့ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာတပုဒ်”“ ငါတို့ဘ၀မြစ်များနဲ့ တူရဲ့သေခြင်းကတော့ ပင်လယ်ကြီးပေါ့ ”ဆယ့်ငါးရာစု ကဗျာဆရာ“ ဂျော့မားရစ်” ရဲ့ ကဗျာနှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုထဲက ငါကြေကွဲစွာ ရွတ်ဆိုမိပေါ့ ။ငါလည်းငါ့ကိုငါမြစ်နဲ့တင်စားခဲ့ဖူးသပ“ငါဟာပင်လယ် ရှာမတွေ့တဲ့ မြစ်တစ ...
မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်) – နှောင်ကြိုးဖွဲ့ပျံသန်းခြင်း
.ချိုးငှက်ကလေး ထပျံဖို့လှောင်အိမ်တံခါး ဖွင့်မိတဲ့အခိုက်ကျော့ကွင်း မိခဲ့ပေါ့..။ ။ မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်) ၈.၅.၁၈ ...
နှင်းခါးမိုး – စပါတာကပ်(၁)
.ဒီအိမ်ကြီးမှာ ငါတို့ဟာ ကျွန်တွေပဲသေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ပဲပေးတာယူ ကျွေးတာစားပဲငြင်းဆန်ခွင့်မရှိဘူးရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးကိုယ့်အခန်းတံခါးကို ကိုယ် ပိတ်ခွင့် ဖွင့်ခွင့်မရှိဘူး၊လင်းနေတဲ့မီးတိုင်တွေကို ငါတို့ထွန်းထားတာပြောင်လက်နေတဲ့ကြမ်းပြင်တွေကို ငါတို့ ...
အိပ်မက်မြို့သူ – ခင်မင်းဇော်
.မိန်းမတယောက်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းမှာမမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတ္တတွေရှိခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်။အလွမ်းတွေကို အလွမ်းဆင့်ပြီးမျှော်မိခဲ့ဖူးလားအချစ်တွေကို အချစ်ဆင့်ပြီးလွမ်းမိခဲ့ဖူးလားမြတ်နိုးတွယ်တာခြင်းကိုဘဝနဲ့ လောင်းကြေး ...
နေဇော်နိုင် – မေမေနဲ့ စကားပြောခန်း(၂)
.ကျနော်ငယ်ငယ်က လမင်းနဲ့ မေမေဟာ အသိအကျွမ်းတဲ့ထမင်းဆီဆမ်း ရွှေလင်ဗန်းဆို ချက်ချင်းကို လှမ်းပေးသတဲ့ ။ကျနော်ငယ်ငယ်က ကြယ်ကလေးတွေနဲ့မေမေဟာ အိမ်နီးချင်းတဲ့ပုံပြောမယ်ဆို မငြီးမငြူ ကျနော်နဲ့ တူတူ နားထောင်သတဲ့ ။ကျနော်ငယ်ငယ်က ငှက်ကလေးတွေနဲ့ မေမေဟာ ဂီတမိတ ...
အေးရိပ်ငြိမ် – သူ့ထက်ကဲ(မန်း)
.အဲ့ဒီမှာ လူတွေ အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာ ဂူတွေ အများကြီးပဲ အသားမည်းတဲ့ ဂူတွေအသားဖြူတဲ့ ဂူတွေချမ်းသာတဲ့ ဂူတွေဆင်းရဲတဲ့ ဂူတွေသိပ်လှတဲ့ ဂူတွေသိပ်မလှတဲ့ ဂူတွေအရိပ်ရတဲ့ ဂူတွေအရိပ်မရတဲ့ ဂူတွေစိတ်ချရတဲ့ ဂူတွေစိတ်မချရတဲ့ ဂူတွေချစ်တဲ့ ဂူတွေမုန်းတဲ့ ဂူတွေလွမ်း ...
ရထားဈေးသည် – စိုးနောင်(မုံရွာ)
အချစ်ကြောင့် ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ မျက်ရည်တွေ – ဖုန်းမောင်
.မချစ်တတ် မလွမ်းတတ်တဲ့ အသဲနှလုံးတွေ ရှိချင်တယ်မငိုတတ်တဲ့ မျက်လုံးတွေလည်း ရှိချင်ပါရဲ့။အခုတော့ ငါက ချစ်တတ် လွမ်းဆွေးတတ်ပါးနှစ်ဖက်မှာ မျက်ရည် လှိုင်းထန်ရတယ်။အသွားလမ်းသာရှိပြီး အပြန်လမ်းမရှိတဲ့နေရာ လူပျောက် ကြော်ငြာ နာရေးသတင်းမင်း ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အ ...
ကဗျာဆန်​ချင်​သူများ – ​ဖိုး​ရွှေညီမှိုင်း
.ဘဝဆိုတာ ကျကွဲခြင်းတမျိုးလား။ဘဝဆိုတာ ရိုက်​ခွဲခြင်းတမျိုးလား။ကျကွဲသူ​တွေရဲ့ ငိုသံကရိုက်​ခွဲသူ​တွေရဲ့ ရယ်​သံတချို့ငိုလိုက်​ကြချိန်​ တချို့ရယ်​လိုက်​ကြ။လှလှပပ​ ​ရေးထားတဲ့အလွမ်းဇာတ်​ကြီးပြီး​အောင်​ မကချင်​​တော့ဘူးလား။အ​သေရဲဖို့ထက်​ အ​နေရဲဖို့ကပိ ...
ငယ်ဘဝ ကျဆုံးခြင်း – ရွှေကြယ်မိုး
.ငယ်ငယ်က ကြားဖူးနေကျ ကောက်ကျစ်တဲ့ မြေခွေးဟာခု မြို့ပြပေါ်မှာ လူတွေဖြစ်နေသလားပုံပြင်ထဲက ချောင်းကလေးမှာယုန်ကို မဖမ်းတော့ဘူးဆည်ကြီးတွေဆောက်လူက လူကို ပြန်ဖမ်းလို့ငယ်ငယ်က ကြားဖူးခဲ့တဲ့မြင့်မိုရ်တောင်လည်း ခုတော့ကြေးနီထွက်နေမလားပဲသယံဇာတခုတော့ ခင်ဗျားတို ...
အတွေး – မင်းချောမြင့်
.လူသားဆန်မှုကို ပြန်တောင်းယူရတော့မယ်ဘုရားသခင်ဆီက ခွင့်ပြုချက်လိုတယ် ကော်ပီတွေ များလှချည်ရဲ့ကွယ်အဆိပ်ရှိတယ်မြွေဆိုးဟာ အရာဝင်တယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်သိသိကြီးနဲ့ မိုက်တယ်လေနုအေးလေးနဲ့ မှားမယ်ဘုရားသခင်က အာမခံ ထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမည်သူမည်ဝါဟု သိနိုင်လေ ...
ရိုးခက်မာန် – မောင်တော … ၇
.ညငှက်​​တွေ ​ခွေး​ခေါင်းစွပ်​ကြီး​ဆောင်းပြီး​ ​အော်​ဟစ်​​နေကြရဲ့​ဖောက်​ခွဲချရ​တော့မလားဒါမှမဟုတ်​ ကတုတ်​ကျင်းထဲ ဖားသား​ရေ​ကျောခင်း​တွေချထားရမလား၊စာမျက်​နှာထဲ ​သေ​နေတဲ့​မျှော့ဟာခုထိ လူပြန်​မဖြစ်​​သေးဘူး၊ အ​မေ ယက်​လုပ်​ထားတဲ့သိုး​မွေး​တွေနဲ့ေ ...
ကဆုန်လပြည့် – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.ဘဒ္ဒကဉ္စနာကိုကျောမခိုင်းခဲ့ရင်။ရာဟုလာရဲ့သံယောဇဉ် ကြိုးကိုမဖြတ်ခဲ့ရင်။ကဆုန်ဟာလွမ်းစရာ ကြုံပါ့မလား။သူတို့သာဇာတ်ပို့ မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဇာတ်လမ်းဟာ အေးနေမလား။ခုတော့ကဆုန်ဟာလွမ်း အောင့်မေ့စရာနဲ့တနင့်နင့်။ ။သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ) ...
မောင်မော်ကွန်း – အစစ်တွေနဲ့ကမ္ဘာလေးတခု
.သူတို့ဆရာမြို့ မှာ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်ဆိုတော့ရွာက တပည့်တပန်းလေးတွေလူမမာမေးလာကြရဲ့ … ။နှမ်းဆီစစ်စစ် တပုလင်းတန်ဆောင်မုန်း ပျားရည်စစ်စစ် တအာတာတောကြက်သားကြော်စစ်စစ် တချို င့်ဗမာကြက်ဥစစ်စစ် ဆယ်လုံးဝက်မလွတ်ဖီးကြမ်းစစ်စစ် တဖီးထန်းဖိုဦး ထန်းလျက်စစ်စစ် တ ...
မပြည့်​အိုး – မောင်ရင်ဆု
.မနက်​ဖြန်​ကျရင်ဒီ​နေ့ထက်​ပိုပြီးလုံမကို အလိုလိုက်​နိုင်​လိမ့်​မယ်ခရီးက အ​တော်​​​ညောင်းခဲ့ပြီပဲအ​ပျော်​​တွေပြန်​​ပြောင်း​ပြောဆိုအငို​အ​မော​တွေကလည်းဘဝ တ​နံတ​လျား​မေ့စရာရှိ ​မေ့ထားလိုက်​ဖို့ ​တွေးတယ်​တရားက တရားသဖြင့်​ လည်​လို့ချစ်​ငြိဖွယ်​ရာ လှ ...
နရီမင်း – ငါ့မြို့(၄)
.(၄)မြို့မှာ ငယ်​သူငယ်​ချင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလည်းကြားရ ကြုံရတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ခုနစ်တန်းမှာ သူက ကျပြီးငါနဲ့ အတန်းလာတူတဲ့တစ်ယောက်သူက ဆင်းရဲလွန်းတော့ကျောင်းလာရင် မုန့်ဖိုးရော ထမင်းချိုင့်ပါ မပါဘူးထမင်းစားချိန်ရောက်ရင်ငါ့ထမင်းချို ...
မန္တလေး (၉ ) – သော်တာစံ(ကလေး)
.`မန္တ​လေး ​သေဆုံးခြင်း´ သီချင်းကမျိုးချစ်​စိတ်​နဲ့ အိပ်​​ပျော်​​နေတဲ့ ဝိဉာဉ်​​တွေကိုတပ်​လှန့်​ နှိုး​ဆော်​လိုက်​တယ်​`ထိုး​သော်​လဲ့ ထိုး​သော်​ကြိုး​ချော်​လို့သွား´ ဆိုသလိုငါတို့ နိုးကြား​မှုကနဂါးကြီး အိပ်​​နေသ​လောက်​ပဲရှိတယ်​။သော်တာစံ(ကလေး) ...
ညစာစားပွဲ – နိုင်ဝင်းသီ
.အရိုးစုကြီးတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြတယ်။ တဂေါက်ဂေါက်နဲ့။ အရိုးစုတွေဆိုတော့ မျက်လုံးနေရာမှာ ဟောက်ပက်ချိုင့်​ဝင်လို့။ဝါကျင့်ကျင့်သွားတွေဟာ တဟီးဟီးနဲ့ ရယ်မောလို့။ ဥသျှစ်သီးတစ်လုံးလို ပြောင်ချောနေတဲ့ အရိုးခေါင်းတစ်ခုပေါ်မှာ နီကြန်ကြန်ဆံပင် ...
လေပြည်ချမ်းချမ်း – ​နွေဦး
.အေးခဲ​နေတဲ့​မျှော်​လင့်​ချက်​ကိုဖမ်းဆုပ်​ပြီးကြွေရွက်​တ​ရွက်​လိုဆောင်းရာသီထဲ ဘဝကိုခြွေချထားခဲ့တာ။​အေးခဲ​တိတ်​ဆိတ်​အထီးကျန်​​ ...လေ​နေတဲ့စိတ်​​တွေ... သိပ်​ဖျားခဲ့တယ်​။လဲ့လဲ့​လေးဖြာတဲ့ ​နေခြည်​​​နူးညံ့​သွေးချိုတဲ့​နွေဦး ဘာကိုမှချည်​​နှောင်​ထာ ...
မောင်ကြူးရင့် – လူပြိန်းကြိုက် နိုင်ငံရေး
.ဆင်းရဲတဲ့ အရပ်မှာလူပြိန်းကြိုက်နိုင်ငံရေး လုပ်စားရတာငှက်ပျောသီး အခွံနွှာစားသလိုသိပ်လွယ်တာပေါ့ပညာမဲ့တဲ့ အရပ်မှာလူပြိန်းကြိုက်နိုင်ငံရေး လုပ်စားရတာပင်လယ်ဘေး အလကားရတဲ့ ရေခပ်ရသလိုသိပ်လွယ်တာပေါ့သူတို့မှာအမှား ဘင် ကလေးတလုံးရှိရင်ရပြီပေါ့အမှား ဘင် ကေ ...
သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ) – အဟောင်းဟာ အဟောင်းသံသရာအတိုင်း
.တိုက်အိုကြီးကို ဆေးပြန်သုတ်လိုက်တယ်သစ်သွားသလို သစ်လွင်မှုနဲ့အိမ်အိုကြီးဟာ ပြောင်ပြောင်ယောင်ယောင်။ကောင်းမလို ခဏ ခဏ ပျက်နေရတဲ့ ဖုန်းလေးသစ်လွင်လာမလို မျှော်လင့်ချက်နဲ့အပြင်ဆိုင်မှာ အညောင်းမိလို့။အဖေက သူ့ရေဒီယိုလေးကို ပြင်ပေးဖို့ ပြောတယ်အမေက သူ့အပ် ...
နားကိုဖောက်ပြီး မြို့ကိုပန်တယ် – အုပ်မိုး
.အငြိမ့်သမလေးရဲ့တင်သားအတုဟာသရေကျမှုအပေါ်မှာ သောင်တင်လို့ပတ်စာကို ခပ်ခွာခွာက စောင့်ကြည့်ဘယ်သူခွာမလဲ။ဖျာကို မသိမ်းသူကယိုင်ပတ်လို့ ကာချင်နေတယ်။တခါက နပေါက်ဟာ(နားပေါက်)တောသားဘဲ။အခု အားလုံး မြို့တက်ခဲ့ကြပြီ။အုပ်မိုး23.4.2018 ...
အစိမ်း​ရောင်​ တနင်္ဂ​နွေ – ရိုးထင်​
.ပြည်​တွင်းစစ်​ကြီးပြီးရင်​ဂျွန်​က ဥပ​ဒေ​ကျောင်းဆက်​တက်​မယ်​မယ်​ရီက က​လေး​တွေနဲ့ ပန်းခြံတ​ခုထူ​ထောင်​မယ်​ တဲ့အာသာဖယ်​ရီရာက​တော့ ဘာမှမ​ပြော​သေး။လမ်းထိပ်​ ကုန်​စုံဆိုင်​​လေးမှာ​နေ့စဉ်​ ​ပေါင်​မုန့်​ခွဲတမ်း မ​လောက်​ဘူးကျည်​ခွံ​တွေ အစာသွပ်​မုန် ...
မိုနေးသစ် – ငါး(၁)
.ငါး​တွေကအကြာကြီး ​ရေငုပ်ကြတယ်ငါး​တွေအ​ကြေးခွံလဲသလား မသိ​ပေမယ့်​​ရေထဲက ​အောက်​စီဂျင်​ကိုတော့ ခိုး ရှူကြတယ်​ငါး​တွေမှာအကယ်​ဒမီ မရှိကြဘူးနိုင်​ရာကို စားတာပဲတ​​နေ့တခြားငါးစာ​တွေ များများလာတယ်​ငါးမျှားချိတ်​​တွေနဲ့ငါး​​တွေရဲ့​ကောင်းကင်​ကိုတည်​​ဆေ ...
မောင်လွမ်းဏီ –ရိုးမပေါ်မှာ အိပ်ပါစေ
.ကောဇာသက္ကရာဇ် ခုနှစ်ဆယ့်နှစ်ခရစ်သက္ကရာဇ် နှစ်ထောင့်တဆယ်ရိုးမစွယ်မှာ နေကွယ်ခဲ့တဲ့ အချိန်လေ။လ ဇူလိုင်ကိုမင်းမပိုင်တော့ဘူးလို့ငါ မပြောနိုင်ဘူးမင်းက ရဲဝံ့သူကြီးတယောက်ပါ။ငုယင်ဗန်ထရွိုင်းသမိုင်းပုံရိပ်၊ အိမ်မက်ရှည်လျားတံတားအောက်မှာ မင်းရပ်စောင့်တယ်။ငှက ...
မောင်ငြိမ်းလူ (ဟယ်လ်ပင်) – ၂ဝ၁ဝ အချစ်
.“အပြောင်းအလဲ” တဲ့ ချစ်သူရေမင်းနဲ့ငါသက်ဆုံးတိုင်…မပြောင်းလဲကြေးနော်ကမ္ဘာပူနွေးရေခဲပျော်ရသစ်ခြောက်ကျိုးကျဗျိုင်းအုပ်လန့်ပျံစသည်…..စသည်ဖြင့်….. ညီလာခံ…။မီးဖိုပေါ်ဒယ်တင်ပြီးမှဆီ ရှာမရတဲ့တို့…..လူတွေဘဝနဲ့များ…..ကွာပါ့….. ။ဆရာနေဇော်နိုင်ရဲ့ သံလမ်းမဲ့ ...
ခရေပန်းသည်လေး – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.ခရေပန်းလေးတွေဟာကားစီးချင်လို့ညီညီညာညာတန်းစီကြတယ်။ခရေပန်းလေးတွေဟာမြို့ကြီးကိုမြင်ချင်လို့ပန်းသည်လေးလက်ကိုဆွဲပြီးလိုက်လာကြတယ်။ကားတွေဟာခရေပန်းလေးတွေကို အဝင်မခံဘူး။မြို့ကြီးဟာခရေပန်းလေးတွေကို အဖက်မလုပ်ဘူး။အမှောင်တွေသည်းသည်းမည်းမည်းရွာတော့လမ်းမီးတို ...
ယောဟန်အောင် – မထူးဇာတ်
.ပလူကောင်လေးတွေလိုပေါ့ပေါက်လဲပန်းတွေ အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်းလာပြီး တပွင့်ပြီးတပွင့် လှလှပပ ထိုးချသူတို့ဘဝတွေက တိုတောင်းလှတာ။ ရုပ်ရှင်တကားက ဘဝကို ပြီးစလွယ်ရိုက်ပြတယ်တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖော်ဖြူလာနဲ့ကံဇာတ်ဆရာက ခပ်ညံ့ညံ့ရယ်ပါ မျက်ရည်ချူချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလားဆေးခါးကြ ...
နရီမင်း – ငါ့မြို့(၃)
.(၃)ငါ့မြို့ဟာ ငါ စပြီး ဝင်လာကတည်းကိုကတစုံတရာ မှားယွင်းနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်​တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် အဆောက်အအုံသစ်တွေအစီအစဉ်​မကျ ပြွတ်သိပ်နေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟိုတယ်တွေ၊ တည်းခိုခန်းတွေ၊ကေတီဗွီတွေ၊ ဘီယာဆိုင်​တွေက တောထလို့သစ်ပင်အစစ်တွေ မရှိသ ...
ဝင်းဌေးဦး – လမ်းကျဉ်းရဲ့ အသက်ရှူသံ
.ကိုယ့် ဘယ်ဟန်ညာဟန်များနဲ့ ကိုယ်ပေါ့ကောင်းကင်တခုလုံးကို စိတ်ထဲအပြည့်ထည့်ထားသလိုမျက်ဝန်းထဲမှာ သာသာယာယာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ရဲ့အလင်းနဲ့ခြေခင်းလက်ကင်း အားလုံးကို သံသယမဖြစ်ခဲ့ဘူး။လမ်းက ကျဉ်းတယ်ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာက ကျယ်ဝန်းတယ်စကြာဝဠာက အနန္တလောကရဲ့ သတ္တဝါစိတ်ေ ...
ချောဘသစ် – ဗာရာဏသီ
.အတုနဲ့ယဉ်ပါးရလွန်းတော့အတုမှ အစစ်ထင်တဲ့ တိုင်းပြည်ဓားရေး လှံရေးက တိုင်းပြည်အတွင်းမှာပဲ ထက်လွန်းနီးရာဓားတွေကလည်း သံဗျင်မှာလည်း ရှိ ခရိုနီမှာလည်း ရှိဆယ်အိမ်ခေါင်းမှာလည်း ရှိ ဖာခေါင်းမှာလည်း ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်ဆိုတော့ဂေါပက ဖြစ်ချင ...
နေရိုင်း – အပြာရောင်သည် လှပသောပန်းချီ ကားတချပ်ဖြစ်သည်
.သံသရာကိုသယ်ပိုးရင်း ဘဝတခုကနေတခု ကူးလူးယုံကြည်မူဆိုတာ ရှေးရိုးစွဲဖြစ်လို့ သမရိုးကျ တွက်ဆလို့မရဘူး၊စိတ်ဟာ အရောင်တွေ အရောင်တွေ တခုပြီးတခု ရေးဆွဲရင်းအပြာရောင်ထဲက အပြာရောင်တွေပဲ ထွက်ကျလာ။ကောင်းကင်တခုလုံးက အပြာရောင်တွေနဲ့အပြည့်ငါ့ဝိညာဉ်ကလဲ အပြာ ...
ရာမိုးဇင် – ဝါဒဖြူစင်တဲ့ ပါဒများ
.ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့နေရာရဲ့မြေသားကိုကလော်ထုတ်လိုက်တစုံတရာ သေချာတယ်ကိုယ်မစားသောက်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မှန်မှာကိုယ့်လူတွေ နွမ်းပါးကြရှာတယ်။သူ့အကြည့်ကကိုယ့်ကို သူပုန်ကိုယ့် အကြည့်က သူ့ကို သူပုန်ပုန်ကန်နေကြရခြင်းဟာ ကြာလာတော့သူပုန်နဲ့ သူကန် အဖြစ်မှန်တွေ ဝေဝါး ...
မန္တလေး(၈) – သော်တာစံ(ကလေး)
.မန္တလေး​ရောက်​ ရှမ်းတ​​ယောက်​ကို နား​ထောင်​ရင်း …လွမ်းတယ်​ဟိုတေ​ခတ်​က မြင်​ကွင်း​လေး​တွေကိုလွမ်းတယ်​ရင်​​လေးဖွယ်​ခု​ခေတ်​ မြင်​ကွင်းကျယ်​​တွေ ရင်​​လေးဖွယ်​ယုံချင်​ယုံ မယုံချင်​​နေ​ရွှေမန္တ​လေးရဲ့ ဇာတ်​နာ​တေးထာဝရ မန္တ​လေးရယ်​အလှမ်းမ​ဝေးချင်​ဘ ...
ယာထဲချောင်းထဲ – မောင်မော်ကွန်း
.ဘယ်သွားမှာလဲ မမေးနဲ့ယာထဲချောင်းထဲ … ၊ဘယ်ကလာလဲ မမေးနဲ့ ယာထဲချောင်းထဲ … ။ဘဝတွေဟာမိုးလင်းတာနဲ့ ယာထဲချောင်းထဲမိုးစုန်းချုပ်ညဥ့်နက်ထိတိုင် ယာထဲချောင်းထဲ … ။ဓားမ ခါးထိုး နွားကိုဆွဲ ယာထဲချောင်းထဲနေပူပူ မိုးရွာရွာ ယာထဲချောင်းထဲမိုးကြိုးထစ် လေပြင်းတို ...
ကျော်ဇံလှ(ကလေးဝ) – ပျားပန်းခပ်နေတဲ့ လမ်းနဘေးက ငြိမ်းချမ်းရေး စားပွဲ
.အရင်အစိုးရမင်း လက်ထက်ကလည်းလမ်းမီးတွေ နေမြင့်အောင် အိပ်ကြတာပဲ။အခုလည်းလမ်းမီးတွေ နေမြင့်အောင် အိပ်ကြတာပါပဲ။နေမြင့်သည်ထိ ရှိနေတဲ့ ငါ့အိမ်က မီးတွေလည်းငါ လိုက်ပိတ်နေရဆဲပါပဲ။တံတားဆောက်တဲ့လူက အနတ္တနဲ့ ဆောက်ကြတံတားဖျက်တဲ့လူက အတ္တနဲ့ ဖျက်ကြ။ပြည်သူတွေရဲ့အသ ...
ဒီနေ့ ငါ့ရဲ့မေဒေး – မင်းမျိုးအောင်စံ
.အိမ်နောက်ဖေးက ကူဘိုတာကြီးကိုရာဇဝင်ချီတယ် ( မ အ အောင်လို့ )သမိုင်းဟောင်းက ဆီဂျီးတွေကိုလက်သန်းလေးတင်မကဘူးလက်ညိုးရော လက်ခလယ်ရောလက်သူကြွယ်ရော လက်မရောဒေါင့်စုံ ရှင်းတယ်။ကြောင်တွေကို ကမ္ဘာလောကကြီးထဲကို ဝင်ခွင့်ပေးတယ်ငါတို့ရဲ့တခြားမျက်နှာတွေကိုရောကြည်ြ ...
အောင်မော်ဦး – ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ကြယ်ပွင့်များသို့ …
.သွားနှင့်ကြသူတွေကထားရစ်ခဲ့ကြတာတွေနဲ့ပဲတရားမျှတမှုကို ဆက်လက်ရှာဖွေကြရမှာပေါ့။ငါတို့ခေတ်ရဲ့ကဗျာဆရာတွေကိုယူ ယူ သွားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရေ …။သင့် မြေပေါ် သူတို့ကဗျာတွေ ထားပေးခဲ့တာ တခုနဲ့တင်သင့်ကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါပေရဲ့။အောင်မော်ဦးဧပြီ၊ ၂၁၊ ၂ဝ၁၈။(ဆရာရ ...
ကမ်လူဝေး – အသံတုဝိဇ္ဇာ ကြက်​တူ​ရွေး လူလိမ်​
.ကြက်​တူ​ရွေး​တွေ အင်္ဂလိပ်​စာရွတ်​ပြိုင်​ပွဲကြည့်​ရအသံတုဝိဇ္ဇာများလို အာလုတ်​သံကြီးများနဲ့​လေးဒီး အီးအီး အန်​ ဂျင်းတဲမန်း ဆိုပဲကဲ ... ဘယ်​လို လုပ်​ကြမလဲ။မတရားလုပ်​​နေတဲ့သူက စားပွဲထိပ်​ထိုင်​ရင်းမတရားရင်​ ငုံ့မခံနဲ့လို့ အသံပြင်းပြင်းဆိုလို့ကဲ ...
ရွှေကြယ်မိုး – သကြားချပ်​​တွေမိုးထားတဲ့​ခေါင်​မိုးရဲ့ ဟိုးအ​ပေါ်
.စတစ်​​ကော်​လံနဲ့ သက္ကရာဇ်​​တွေကိုသိခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းလည်း အခု ဂျင်း​ဘောင်းဘီရှည်​နဲ့ဟစ်​ပီဆန်​လာတာကို ​တွေးမိချင်​မှ ​တွေးမိ​တော့မယ်​​ကောက်​ရိုးပြင်​​ပေါ်က ​ဖုန်​ထ​ခြေ​ထောက်​​တွေဘယ်​​ပျောက်​သွားသလဲလည်း​တွေး​တောဖို့ မင်း စိတ်​ပါချင်​မှ ပါ​တော့မယ ...
အောင်မော်ဦး – စာမေးပွဲ
.သင်္ချာ တပုဒ်လုံး အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ဟာစာမေးပွဲခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်သူ ... ဆွဲ ထွက်လာတဲ့ အနာဂတ်ကအုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲတွေနဲ့ အမွှေးတိုင် မီးခိုးတွေကြားမှာ လူလုံးမကွဲဘူးငါတို့မှာတော့ ရင်တမမနဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေ အချီးနှီးဖြစ်ဖြစ်သွားတာ(ဒီတိုင်းချည်း)လက်ပို ...
စာမေးပွဲ – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.လမ်းဖြူဖြူလေးပေါ်မှာဘော့ပင်ကားလေးဟာရပ်လိုက် သွားလိုက်။ဘော့ပင်ကားလေး ရပ်သွားတဲ့အခါအိတ်ကပ်ထဲရှိတဲ့ အဆောင်က ဆင်းမတွန်းဘူးဦးနှောက်ထဲရှိတဲ့ အဆောင်က ဆင်းတွန်းတယ်။သုံးနာရီအတွင်းမှာလမ်းရဲ့သုံးပုံတပုံ ရောက်ပါ့မလားမေးခွန်းဟာချွေးစက်တွေအဖြစ်အရေပြားပေါ်လမ်း ...
ဖိုး​ရွှေညီမှိုင်း – ရုပ်​ရှင်​ကြည့်​ခြင်း
.ချစ်​လိုက်​​ပျော်​ရွှင်​ကြည်​နူးလိုက်​လွမ်း​တပူ​ဆွေး သနားလိုက်​​အေးမြငြိမ်းချမ်း တည်​ငြိမ်​သွားလိုက်​​ဒေါသူပုန်​ထ ခက်​ထန်​လာလိုက်​စက်​ဆုပ်​ရွံရှာ အံချင်​လာလိုက်​​ကြောက်​ရွံ့လာလိုက်​ရဲဝံ့လာလိုက်​ရင်​သပ်​ရှု​မော အံ့ဩလိုက်​ဝင်​စား ခံစား သုခုမထဲမှ ...
အ​ဝေး​ပြေး – ရိုးခက်မာန်
.ကျီးတ​အုပ်​ ထပျံသွား​တော့​နောက်​တ​အုပ်​က​အော်​ဟစ်​မြည်​တမ်းပြီး ကျန်​ရစ်​ခဲ့၊နားခဲ့တဲ့ သစ်​ပင်​က​ဆေးလိပ်​​ငွေ့​တွေ တလူလူနဲ့ ​လောင်​ကျွမ်း​ဈေးဝယ်​ထွက်​ကြတဲ့လက်​​ပံပင်​​ပေါ်က ဇရက်​​တွေတဖျပ်​ဖျပ်​လူးလို့ပါ့၊​ဝယ်​ကြပါလားဗျကျွန်​​တော်​ရဲ့​ပျော်​ရွှ ...
သုတလင်း (ဆင်ပေါင်ဝဲ) – လက်ရှိဖြစ်တည်မှု
.မပိုင်ဆိုင်တော့တဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုပုလင်းထဲ ထည့်ပြီး မျှောပစ်လိုက်တယ်။ကြိုက်လွန်းတဲ့ကော်ဖီကို မကြိုက်မိအောင်ရှောင်လိုက်တယ်။ဖြစ်တည်မှုဆန်ဆန်ရင့်ကျက်ပြဖို့ကလေးဆန်မှုတွေ မီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။ကျန်ခဲ့ရမယ့် အရာတွေမကျန်အောင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကန်တင ...
​နေလွဏ်းအိမ်​ – ဘဝ
.​ကျောက်​သင်​ပုန်း​ပေါ်ချ​ရေးမှ​တော့​လေဒဏ်​ကို​တော့ ခံနိုင်​ရမှာ​ပေါ့​သွေး​ပေါင်​ကျ​နေတဲ့ ဘဝဟာကွန်​ပြူတာရဲ့ဘက်​ဂ​ရောင်းလိုကြည့်​လို့​ကောင်းမှာ မဟုတ်​ဘူး​မျှော်​လင့်​ခြင်း​တွေကို ကြိုးတပ်​ပြီး​လေဟုန်​စီးဖို့ လွှင့်​တင်​လိုက်​တယ်​ဖြစ်​လာသမျှ ငါ့ ...
ဖုန်းမောင် – အစွန်းမလွတ်သူများ
.ငါ့ကို ကြည့်ပြီး မင်း ရယ်နိုင်တာပေါ့ဆင်းရဲ ပင်ပမ်းတဲ့အလုပ် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဖူးတဲ့ လူတယောက် အဲဒီဘဝမှာ ထာဝရ ပျော်နေမယ်လို့ ။မင်းကို ကြည့်ပြီး ငါလည်း ရယ်ရပေါ့အဝတ်တထည် ကိုယ်တခုရဲ့ အပေါ့ပါးဆုံးဝန်ကို ဘယ်လောက် လေးလံတယ်ဆိုတာ လမ်းကြုံရင် ဝင်ထမ်းကြည့်လိ ...
သင်းရည်လွင် – ငါတို့မသေချာသော ခရီးသွား
.ငါတို့ နှေးကွေးမှုကို ကမ္ဘာကြီးကစိတ်ရှည်တယ်ရာသီတွေ သည်းမခံတတ်တော့ ပင်လယ်စင်ရော်တွေ ပြန်မလာတော့ဘူးကွေကွင်းသွားတဲ့ မနက်ခင်းတွေကိုငါ ပြန်မရတော့ဘူးလို့မြားတွေအသင့်ပြင်တဲ့နေ့ကအသင့်ပြင်ထားတဲ့ ခရီးကို ဖြုတ်ချထားလိုက်တယ်သိပ်ကြီးတယ် ထင်ရတဲ့ ဘဝကိုတယောက်က ...
မောင်ကြူးရင့် – ဆင်းရဲသောမေတ္တာတရား
.သူ့ခေတ်နဲ့တော့ သူကြီးကျယ်သူတို့ကိုလည်းပြိုင်ဖို့ မလိုဘူး ထင်တယ်တမိုးအောက်ထဲ နေပြီးငါတို့ ဝေးကြနီးပေမယ့် ငါတို့ ဝေးကြတယောက်လက် တယောက်မဆုပ်နိုင်ကြတယောက်ပခုံး တယောက်မဖက်နိုင်ကြတယောက်အပူ တယောက်မငြှိမ်းနိုင်ကြတယောက်အသက် တယောက်မကယ်နိုင်ကြငါတို့ကု ...
ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ) – အမှောင်ခေတ်ကြီးတခုလုံးကို စိမ်ခေါ်ခဲ့သူ
.ငါတို့ခေတ်မှာသူလိုလူတယောက် ရှိနေခဲ့တာကိုကငါတို့ခေတ်ရဲ့ မာန်မာနကိုပြတဲ့ မဟာသင်္ကေတပါပဲ။သူဟာဘယ်လောက်အထိ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်မလည်းသူဟာမသေခင်ကတည်းက မသေဆေးကို စားနိုင်ခဲ့တယ်သေဆုံးသွားသည့်တိုင်အမတကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။တချို့ကခေတ်ကြီးတခုကို ပါ ...
မို​နေးသစ်​ – ပျော်သလိုနေပါ
.စိတ်​ကူးနဲ့​ရေးရတဲ့ အရုပ်​ထဲမနက်​ဖြန်​​တွေပဲအခါခါ ထပ်​မက်​တယ်​။ဆန္ဒမှာသူ​တောင်းစား မဖြစ်​လိုသူ​မျှော်​လင့်​ချက်​များရင်​ဘတ်​နဲ့သီတဲ့ သံစဉ်​အ​ကြောင်းနှုတ်​ခမ်းချင်း​တေ့မှုတ်​ပြရမလိုရင်​ချင်းအပ်​ပြီး စိတ်​ချင်း ​ဝေး​နေရတဲ့ဘဝ။အ​ကြောင်း​ကြောင်​ ...
တောက်​!!!! – မိုး​ကျော်​​ဌေး
.ခေတ်​အဆက်​ဆက်​ မင်းမိဖုရားတို့ရဲ့ယင်​​ကောင်​အုပ်​ကြီးရာဇ၀င်​စာအုပ်​ကြားထဲက ပျံထွက်​မလာပါ​စေနဲ့…တ​ရွက်​ချင်း လှန်​လှန်​ တ​အုပ်​လုံး ဖြဲဖြဲ သမိုင်းဟာ သမိုင်းဆန်​ဆန်​ ညှီစို့စို့နံ​စေတဲ့ ဘာဝင်​စား ညာဝင်​စား သတ္တဝါ​တွေ…​ခေတ်​ကို ​ခေတ်​ဆန်​ဆန်​ ခ ...
ဧညိမ်းဝေ – အရိပ်ဖမ်းသူများ
.တယောက် ချွေးစက်ကိုတယောက် တောက်ထုတ်ရင်းငါတို့ အငန်ဓာတ်ကို ကိုင်းကူးကြတာပေါ့လျှာပ်ါဝဲနေတဲ့ ခေတ်အရသာထဲမြိန်ရှက်စရာကမိန့်ခွန်းရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာပါလာတယ်တိမ်တွေထဲ ထွက်ကျလာတဲ့ အိပ်မက်ကတိမ်တွေထဲဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်လားကောင်းကင်နဲ့ မြေသားခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ ကွဲပြ ...
မောင်ရဲနွေ(ပလိပ်) – မသေတဲ့ လူ
.သံမဏိလိပ်ပြာဘယ်တော့မှ မသေဘူးအမှန်တရားအတွက် ရှင်သန်နေဆဲ…။မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်) ...
လင်းနွေးအိမ် – တောင်ကျချောင်းလေး
.မြစ်ကြီးတစင်းကို ဂုဏ်ပြုကြတဲ့အချိန်မှာအဲဒီမြစ်ကြီးဖြစ်လာဖို့ ပံ့ပိုးနေတဲ့ တောင်ကျချောင်းလေးကို ငါဂုဏ်ပြုမယ်သူ့မှာ ဘဝကို တဘက်သတ် စီးဆင်းပေးလိုက်တယ်တောင်ကျချောင်းလေး ဆိုတဲ့အတိုင်းစုန် မဆင်းဘူး ခုန်ဆင်းရတယ်နောက်ဆုံးမြစ်မကြီးထဲသူ့ရေတွေ ရောက်သွားတေ ...
မောင်လွမ်းဏီ – မင်း ရွတ်ရမဲ့ အဖေ့ကဗျာ
Posted by: မောင်လွမ်းဏီ
.“ အမှတ်တရဆိုတာထက် ပိုတဲ့အကြောင်းချင်းရာများ - ၁ ”တော်လှန်နှစ်တွေကိုချစ်လိုက်တာတဲ့ABSDF ရဲဘော်တွေက ပြောတယ်သေ့ဘောဘိုးတွေ ချစ်တာကငှက်ပျောအူကို သူတို့လောက်ချစ်လိုက်တာချစ်တတ်တာ မရှိ။ဓာတ်ပုံလေး ပြ ပြ သက္ကရာဇ်တွေကဓမ္မ၀င်းထွန်းကို သရော်နေတာ အစ်ကို တဲ့။အု ...
အကယ်ဒမီည – တိုးနှောင်မိုး
.ရန်အပေါင်း စိတ်ရှိလက်ရှိ မုန့်လုံးလိမ္မော်ရတနာ စိန်ကျောက် အလေ့အထပလပ်စတစ်ဟာ ကြည်လင်သန့်စင်မိတ်ကပ်မှာ အမှားမရှိဘူးခြင်ထောင်မှားဝင်တာလည်း အပြစ်ပဲခိုးသားငါးရာနဲ့ တခါထဲ မှားခဲ့တာလားဝေသန္တရာဇာတ်က၊ က, မပြီးတော့ဘူးကင်မရာဖလက်ခ်ျဂန်းက အလင်းမှာပန်းတပွင့်ေ...
ကိုက်ခဲနေတဲ့ အရောင် – စိုးခိုင်ညိန်း
.တမာနံ့တွေ လေထဲ ပါလာပြီဆိုရင်သူ့အိမ်ထောင့်က ပိတောက်ပင်လေးမှာကိုယ်က တစ္ဆေတကောင်အဖြစ်နဲ့ပွင့်ချပ်တွေကို အတင်းဆွဲဖွင့်နေရင်းသူမရဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ခြောက်လှန့် နေမိသူပေါ့။အခုတော့ တမြို့လုံး သံစဉ်တွေနဲ့ စိုရွှဲနေတာတောင် ကိုယ့်မှာတော့ ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့က ...
မင်းတပ် ၃၄ – ဟာရှိန်း(မင်းတပ်)
.တောင်တန်းတွေကိုသက်သေထားဂိမ်းတခုဆိုလည်းအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တော့ ထားရမယ်။အနာဂတ်စီမံချက်ပေါ်မေးတင်ပြီး ရွက်လွှင့်ရမယ် တောတောင်ရေမြေရိုးသားခြင်း တွင်းနက်နက်ထဲ ဆန္ဒကိုငင်ယူကြည့်တော့ဗလာကျင်း အိပ်မက်တွေကိုသာ ရရှိခဲ့။အနိုင်ရပါတီကိုအာဏာရပါတီတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး ...
မောင်ရင်ဆု – ငါက အချစ်​ကို မကိုးကွယ်​ဘူး
.သစ်​ရွက်​တ​ရွက်​တိုင်းရဲ့ရင်​ခုန်​သံဘာသာပြန်​ထားပြီးသား ရှိတယ်​​ကောင်းကင်​ဆီပင့်​​မြှောက်​ထားတဲ့မျိုး​စေ့မှန်​ ​မျှော်လင့်​ချက်​​တွေရှိတယ်​အဆန်းတကျယ်​ မဟုတ်​​ပေမဲ့ရိုး​ဖြောင့်​တဲ့ အကျင့်​အမူနဲ့အရှက်​လုံတဲ့ စိတ်​ကမုန်​တိုင်းကို လမ်း​ကြောင်​ ...
သော်တာစံ(ကလေး) – မန္တလေး(၇)
.ရာဇ၀င်​များရဲ့သတို့သမီးကို နား​ယဉ်​ခဲ့တ​ခါက ဧရာဝတီညများကိုကြည့်​ရှု နားဆင်​ခဲ့ငါတို့ ကျောခိုင်းထားတဲ့မြစ်​မင်းဧရာကို အားနာ​နေမိရဲ့သမိုင်းရဲ့တာဝန်​​တွေ သူကျေပွန်​ခဲ့​ပေမယ့်​ငါတို့တာဝန်​​တွေ ​ကြေမွလို့ … ။သော်တာစံ(ကလေး) ...
တာဝတိံသာက ဗော်လံတီယာ – ကာတွန်း Kzzh
နရီမင်း – ငါ့မြို့ (၂)
.(၂)ငါ သူတို့နဲ့အတူ မဆလခေတ်ထဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါအစစအရာရာ ရှားပါးတဲ့ ခေတ်ပေါ့။အားကစား လေ့ကျင့်ပြီးအပြန်သူငယ်​ချင်းတသိုက် ဆာလွန်းလို့ စား​သောက်​ဆိုင်​ ဝင်ပြီးစားလိုက်​ကြတာရှင်းစရာ ပိုက်​ဆံမလောက်လို့အကြီးအကျယ်​ အကျပ်ရိုက်ဖူးတယ်။စကား​ပြောကြတဲ့အခါမှ ...
စိုးနောင်(မုံရွာ) – နှစ်ဆန်းတရက်
.တရား စခန်းကနေမတရား စခန်းသွားရမှာကိုပျော်လွန်းလို့စိတ်ဟာ မျောက်လို ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ။အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်ပြီးမောင်းထုတ်လို့မရတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးဟာစစ်ပွဲ။အလွှတ်ခံရတဲ့ ငါးဟာလွှတ်ပေးတဲ့ လက်ကိုပက်ပက်စက်စက် ဆဲသွားလေရဲ့။ ။ ...
နေရိုင်း – အလံတွေက ဖောင်းပွစေတယ်
.နာနာကြည်းကြည်း မုန်းလိုက်ပါအရည်မရ အဖတ်မရနေ့တွေက များခဲ့တယ်ဒီကနေ့ငါတို့အလံတွေက ဖောင်းပွစေတယ်။ငိုနေတဲ့မြစ် ရွာချလိုက်တော့ငါတို့မျက်ရည်တွေ၊ ငါတို့သွေးတွေကအဲ့ဒီ အလံအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တယ်။ ရွံစရာတွေများလို့ လက်ညိုးထိုးအန်ရအောင်လဲဖွက်ထားလို့မရအောင် ကိန်း ...
ကောင်းရာသုဂတိမှာ ခုထိ အမေပြုံးနေဆဲ – အောင်သာငယ်
. “ ဒေါ်ခင်မာအေး အောက်မေ့ဘွယ် ကဗျာ ” တကယ်တော့သည်နေ့ တနေ့ခင်းလုံးကျနော့် နှလုံးသားကိုမျက်ရည်များ ဖုံးအုပ်ထားတာပါမေမေ...ကျနော် မငိုချင်ဘူးအမေ့လို သံမဏိချောင်းတချောင်းကျနော် ကောင်းကောင်း ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့...ဒါပေမယ့်... အမေရယ်အမှန်တရားကို ချစ်တဲ့ အမေ ...
အမေ မသေဘူး – အောင်သာငယ်
. “ ဒေါ်ခင်မာအေး အောက်မေ့ဘွယ် ကဗျာ ” ကျနော်ကအသုံးမကျတဲ့ သားတယောက်ပါ... အမေ.. အမေရင်နာနေမလား။ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးချိုအောင်နေကြ ... တဲ့။အမေ့ ဘ၀ကတော့ခါးသီးခဲ့လှပေါ့...။ဒါပေမယ့်သမဂ္ဂရဲ့ သမီးတယောက်မှာတောက်ပခဲ့တဲ့ စိန်စ စိန်မှုန်တွေ ဘယ်တော့မှ မကုန်ပါဘူး... ...
အလွမ်းမြစ် – အေတီအေကေ
. “ ဒေါ်ခင်မာအေး အောက်မေ့ဘွယ် ကဗျာ ” “ညံဇံ” ရေ …ခုတော့မှုန်နေတဲ့ မိုးပွင့်တွေမှိုင်းနေတဲ့ နှင်းပွင့်တွေကြေကွဲနေတဲ့ “အလွမ်းပွင့်”တွေဟာငါ့ရင်ထဲက ဆူဝေနေတဲ့ မုန်တိုင်းပွင့်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီ။မျက်စေ့အောက်မှာ ရှိနေတုန်းက(နင်) မရှိသလိုမျိုးမျက်စေ့အောက်က ...
အုန်းမြင့်လှိုင် – ဒဏ်ရာပိုပြင်းလေ သမိုင်းက ပိုချိုလေ
. “ ဒေါ်ခင်မာအေး အောက်မေ့ဘွယ် ကဗျာ ” မင်းတို့အမေ သေသွားတာမဟုတ်ဘူး“ ကျ ” သွားတာတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတာသူရဲကောင်းပီသစွာတလျှောက်လုံး သူမ ဘဝမှာအချိုဆိုတာ မမြည်းစားခဲ့ရအခါးတွေချည်းပတမာပင်ထိပ်ဖျားက ကြက်ဟင်းခါးတွေနဲ့အနှစ်လေးဆယ်ကျော်“ တကသ ” ရဲ့ ...
မောင်အောင်ပွင့် – ငြိမ်းချမ်းရေးညစာ…မှ
. “ ဒေါ်ခင်မာအေး အောက်မေ့ဘွယ် ကဗျာ ” “ ကိုယ်ကျိုး စွန့်လွှတ်ကြရလွန်းလို့သူတို့ ဇနီးမောင်နှံမျက်နှာကိုစေ့စေ့ မကြည့်ရက်ဘူး”မန္တလေးမြို့ရဲ့ မနက်ခင်းကဗျာဆရာတခါက ပြောဘူးတာပါ။ သမဂ္ဂမှန်စတွေ ကွဲကြေတဲ့အထဲသူတို့အမြတ်တနိုး မင်္ဂလာဦးပစ္စည်းတွေ ပါသွားပြည်သူတွေန ...
ပိ​တောက်​တ​စ္ဆေ – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.​နွေမြင့်​​လေ အလွမ်းရင့်​​လေတန်​ခူး​လေမှာ ရွက်​​ခြောက်​​​တွေသိုက်​သိုက်​မြိုက်​မြိုက်​ ​​​ကြွေ​နေဆဲ​နွေလယ်​မိုး တပြိုက်​နှစ်​ပြိုက်​မှာတခဲနက်ပဲမြို့ကြီးထဲကို ပိ​တောက်​​တွေ ဝင်​လာခဲ့။မြို့ကြီး ရင်​ထဲကို ပိ​တောက်​​တွေ ဝင်​လာ​တော့ပိ​တောက်​​တွေရဲ့ ...
ထက်သစ် – နင့်​နင့်​သည်းသည်း အ​မေ
.လိုင်းက အကြမ်း​တွေ..​ခေါက်​ကြည့်​လိုက်​​တော့ လှိုဏ်​သံမြည်​​နေတယ်​နင်းထားတဲ့ ​ခြေ​ထောက်​က ​နွေးလို့စိတ်​က ​မြောက်​ဝင်ရိုးစွန်းမှာကျွန်​​တော်​ ကြင်​နာတတ်​ပါတယ်​ဆိုတာက​လေး​တွေ အရုပ်​​ရေးကြသလိုလိုသလို ပုံ​ဖော်ကြည့်​ရတယ်​တကယ်​​တော့ ဘဝက မတန်​ပါဘ ...
မောင်ထိန်လင်း(မြို့သာ) – သမ္မတကြီးတွေ
.ဗိုလ်ခြေတထောင် ပြတင်းပေါက်ကြီး တွန်းဖွင့်အလင်းရောင် ခပ်ဟဟ တိုးဝင်လာတယ်အိပ်ချိန် နိုးချိန် သိပြီခါးကြားထိုးထားတဲ့စာအုပ် ထုတ်ဖတ်ပါအပြင်ဘက် မျှော်ကြည့်ပါအသက် ဝ ဝ ရှူပါလရောင်ခံစား၊ ကြယ်တွေ ရေတွက်ကြည့်ပေါ့ကိုးရီးယားဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့လိုလေမျက်မှန်မည်း ...
မောင်နောင်မွန် – လောင်ကျွမ်းပြာကျခဲ့ပြီးနောက်
.တဖြည်းဖြည်းလောင်ကျွမ်းပြာကျနေတဲ့ဆေးလိပ်တိုတချောင်းကို တွေတွေလေငေးနေမိအသက်ရှိ ရုပ်ပုံတခုကို ဆေးလိပ်ပေါ်ဆွဲထားခဲ့နှလုံးသားနဲ့ ခံစားနိုင်တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို ရေးသီထားခဲ့အငွေ့တွေ တလူလူ ပျံတက်ခဲ့မှုကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့။ဘီလ်တဲရဲ့ တေးသီချင်းသံ ဆွေးဆွေးလေး ...
လှိုင်မွန်(မင်းဘူး) – ပိတောက်လိပ်ပြာ
.တခုခု လွဲမှားနေပုံနဲ့ မလုံမလဲ ပိတောက်တို့ ပွင့်ပြီအပူငွေ့ လောင်ကျွမ်းသူ့ အလွမ်းမှာဘာလို့ သင်္ကြန်မကျခဲ့သလဲအငမ်းမရ အဖြေရှာတုန်း...ဗြုန်းဆိုရိုးတံငုတ်တိုတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နေလောင်ပွင့်ဖတ်တွေ လွင့်ကြဲကြေမွအဝါရောင်လမ်းမဖြစ်သွားမြနန္ဒာနဲ့လည်း နံရြံ ...
နရီမင်း – ငါ့မြို့ (၁)
.(၁)မင်းကို မွေးခဲ့တဲ့နေရာမင်း ပြန်​မလာ​တော့ဘူးလားလို့လှမ်းလှမ်းပြောနေတဲ့ သူငယ်​ချင်းတွေအတွက်ဆယ်လ်မွန်သီချင်းကို ညည်းရင်းငါ့မြို့ကို ငါ ပြန်လာခဲ့တယ်။ငါ နေစဉ်က တိုင်းမြို့တော် ဖြစ်ပေမယ့် စက်ဘီးနဲ့ တပတ် ပတ်ကြည့်တောင်ဘာမှ မကြာတဲ့ ငါ့မြို့ကအဆမတန်​ ...
နေရိုင်း – ခဲမူးစေ့များ
.ဒီလူကို လွမ်းရတယ်လမ်းတွေက ကျဉ်းလွန်းတယ်အကြောင်းမဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ကိုယ့်လိပ်ပြာက မလုံဘူး။ခက်တာကခေတ်တွေထဲ လျှာရိုးက မရှိဘူးပဲတွေက ဈေးမကောင်းပြန်ဘူးငါတို့ လယ်ကွက်တွေကခြောက်သွေ့လွန်းတယ်။ဇာတ်သဘင်မဏ္ဍပ်တွေထဲငါတို့နွားတွေက ဇိမ်ခံလွန်းတယ်လယ်တွေက ကောက ...
မို​နေးသစ်​ – ကျဉ်း​နေတဲ့​ထောင့်​ချိုးများ
.သီချင်းကို တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်စွေစောင်းရုံကလွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့စတုဂံတွေရဲ့အရှင်အသန်နဲ့မှိုချိုးမျှစ်ချိုးတွေကအရမ်းမို့မောက်လာအနိမ့်စားမျက်ရည်ကိုကိုင်းအဖျားမှာတောင်မချိတ်ချင်တော့လွယ်မယ်ထင်ရတဲ့ထောင့်ချိုးတွေအတိုင်းခုထိကွေ့ကောက်ကြေကွဲခဲ့ပါတယ်ပွေ့ထ ...
လင်းနွေးအိမ် – သင်္ကြန်ဆုတောင်း
.ဘဝမှာ တခါမှ ကိုယ်ကြွေတဲ့သူကို ရေမလောင်းဖူး ပန်းမပေးခဲ့ဖူးပေမယ့် အဝေးကနေ လွမ်းဖူးတယ်။သင်္ကြန်စာထက် သံချပ်စာကို ပိုကြိုက်တယ်။နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ သံပုံးတီး တောထုတ်ရတာ ကျေနပ်တယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေ များလွန်းတဲ့ ခေတ်မှာနေ့တိုင်း နှစ်ဆန် ...
ကမ်လူဝေး – မှောက်ထားတဲ့ ဖဲ
.သူ့ရဲ့​မှောက်​ထားတဲ့ ဖဲချပ်​က ချီးဖဲ။အ​ပေါ်မှာ လှန်​ထားတဲ့ ဖဲဆင်​က လှမှလှလှလွန်းတဲ့ဖဲဆင်​ကို လူတကာ​ကြောက်​ကြ​တော့သူ ​ဟန်​နဲ့ပန်​နဲ့ဟောက်​စားခဲ့တာ အခါခါသူဟာ ချီးဖဲကို နင်းထားသူသူ့ ​အောက်​ဖဲက ချီးဖဲသူ့ရဲ့​အောက်​ဖဲဟာ ကစားဝိုင်းမှာသတ္တိရှိရှိ လှန် ...
သင်းရည်လွင် – ဒီအကြောင်းတွေ လူပြောများတုန်းပဲ
.ရေလယ်ခေါင် ဖောင်ပျက်ကိန်းထဲသက်ရောက်ယတြာမှာ လူအရှင်လတ်လတ် နွေရောက်ပြီဆို ကျုးကျော်တဲလေးတွေဘဝကို မီးချိတ်မီးကပ်နဲ့ ခုခံထားကြအဝေးကကြည့်ရင် ကန်စွန်းရွက်အခင်းထဲ ရေမှော်လို တွယ်ကပ်မြို့ က အန္တရာယ်များတယ်ကိုယ့် အကြောင်း ကိုယ်မပြောကြညနေဆို အလုပ်ကြမ်းသမ ...
ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ) – မွေးနေ့မှာ ဟာသလွန်ခေတ်ကို တမ်းတခြင်း
.ညကပန်းပွင့်တွေကိုအိပ်ရာပေါ်ကြဲပြီးမှ အိပ်တယ်မနက်ကြတော့ပိတောက်ပန်းတွေက ခြင်ထောင်တခုလုံးပြည့်ညပ်နေအောင် ပွင့်တော့တာပဲ။(မှတ်မှတ်ရရယက်ပ်တူရှန်ကို ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ရက်။)အပွင့်ဓာတ်ကို အပွင့်ဓာတ်နဲ့မှ ခတ်လို့ရတယ်ငါ့ရဲ့ခေတ်ဟာ မှောင်လွန်းတော့ငါ့အတွေးတွေ ...
ပိတောက် – နေဇော်နိုင်
.တပင်လုံး ရွှေဝါရောင် အပြုံးတွေနဲ့၃၆၅ ရက် ကျော်ကျော်ကို ချုံ့ပစ်လိုက်တယ်ဒီ ရင်ဘတ်ကြီးက ကြမ်းပါတယ်မင်းကိုတွေ့တော့ အလိုလိုလွမ်းလာတယ်။နေဇော်နိုင် ...
တလမ်းလုံး ပိတောက် – နှင်းခါးမိုး
.ငါ့ အပြန်လမ်းကိုအဲဒီလို ရွှေရောင်ဝင်းနေစေရော့လို့ငါ မတောင့်တခဲ့ပါဘူးငါဟာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲမှန်လုံကားလေးတစီးပေါ်မှာ လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။တောင်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသွားခဲ့တယ်လေယာဉ်ပျံကြီးစီးလို့ပြန်လာတယ်အဲဒီလို တိုးတိုးရေရွတ်ရင်း တယောက်တည်းပြုံးမိတယ်။ဘာမ ...
မောင်လွမ်းဏီ – ပိတောက်လိပ်ပြာ
.ကျနော့် အစ်ကိုက သင်္ကြန်ပိုးရှိတယ်ဖဲချိုးရင်တောင် သင်္ကြန်မိုးလေးနဲ့လေချွန်တာမျိုး။ကျနော့်အစ်ကိုကနိုင်ငံရေး အားကောင်းချက်က တမျိုး၉ ကျော်တယ်လွှတ်တော်ချာနယ်က ဘယ်မှာလဲ တဲ့။ကျနော့်အစ်ကိုက၀တ်လုံတော်ရတလောကလုံးကို အမှုသည်လို့လက်ဘက်ရည်ဆိုင်က စမူဆာထင်သူ။ဒင် ...
.ပိတောက်သုံးဆယ်ကြာဒဏ်ရာရငါ့မြေပေါ်ကငါ့ဝိညာဉ်လွင့်စင်သွားခဲ့ဟို့့ ဝေးဝေးကလာတဲ့ဘုရားကျောင်းကခေါင်းလောင်းသံလိုငါ့ဝိညာဉ်ဟာငါ့မြေကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပိတောက်တဆွေဟာငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပူးဝင်ခဲ့ငါ့ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးရွှေတုံးရွှေခဲကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီ့ရွှေတုံးရွှေခဲကြ ...
စည်သူသိင်္ဃ – ပိတောက်တွေ ဝေဝေမဝေဝေ အလွမ်းတွေနဲ့ ဝေနေတဲ့နွေ
မင်းချောမြင့် – နွေ
.အရိုးပေါ် အရေတင်အဲ့ဒီ ကာလကိုပဲ မှတ်တမ်းတင်ရတော့မယ်ငါ့လက်ထဲ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဤ အရာငါ ခိုးသွားတဲ့နယ်စပ်ထိပဲ......စကားတွေက မူမမှန်လှဘူးပညာရှိတွေလည်း လူမဟုတ်လားခုတလော ခုတုံး လုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆင်ခြင်ပါညည အိပ်မပျော်ဘူးလေတခါတလေ ရေငတ်တယ်ဘာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အေ ...
သူ့ထက်ကဲ(မန်း) – နွေသို့ …
..နွေ ငါအလွမ်းတွေနဲ့တခါတခါ နေဝင်မိုးချုပ်ရတာလဲပျော်ပါတယ် နွေ။မင့် ကြောင့်သစ်ရွက်ကလေးတွေကြွေတယ်မင့် ကြောင့်ခေါင်းလောင်းသံလေးတွေတိတ်ဆိတ်အရိပ်တွေပျောက်လို့ အိပ်မရတာမျိုးရန်အညှိုးတွေနဲ့ လက်ညှိုးတွေ တောက်လျှောက်ထိုးပြီးယိုးမယ်ဖွဲ့ ကဗျာမစပ်ချင်ပါဘူး။ ...
.စုံနေတာပဲတောသင်္ကြန်လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်…။သင်္ကြန်ရေဆိုတာ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ လိုပြန်…။ပိတောက် သင်္ကြန်ငု သင်္ကြန်မြန်မာ့ဟန်…။တူးပို့ညံမြူးစို့ မြန်ပျော်ကြတဲ့ အသံမျှော်ကြတဲ့ ငုသင်္ကြန်…။ ။မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်)၅.၄.၁၈ ...
တန်ခူး – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.လေရူးလေးက တေးသီဆိုရွက်ကြွေလေးက ကခုန်လို့မိုးတိမ်လေးက သင်္ကြန်ရေနဲ့ပက်တော့ပိတောက်ဖူးလေးတွေက ရှက်သွေးဖြာဝါလို့ညနေခင်းထဲမြေသင်းနံ့လေး လွင့်လို့တူးပို့တူးပို့သံမှာငါတို့သားလေးတောင် ကခုန်တတ်လာပေါ့တချိန်တုန်းကတူးပို့တူးပို့သံမှာငါ့နှလုံးသားလေး ကခုန်ခဲ ...
မောင်ငြိမ်းအောင်(အင်္ဂပူ) – စက္ကူငှက်
.တလူလူလွင့်နေတဲ့ လေညင်းမှာအုပ်ဆိုင်းမထားတဲ့ ရနံ့တွေ အဝေးမရောက်ဘူးစက္ကူပန်းတွေ ပွင့်ကြသလိုစာရွက်တွေက စုတ်လွယ်ပြဲလွယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ ချိုးဖြူငှက်ကလေး သေသွားတယ်မုန်တိုင်းကြား စံပယ်တွေပွင့်တော့မလိုတကယ်က….လေညင်းသာသာမှာ သစ်ရွက်လိုကြွေနေတာလိပ်စာမပါတဲ့ လက်ေ ...
ထက်လူအောင် – ၁၉၉ဝ ကျော်နှစ်များက
.ဓားလှီးမုန့်ကို လက်ဖက်ရည်နဲ့တို့စားမလိုင်အထည့်နည်း ဆိုင်ရှင်ရဲ့ခေါင်းကိုသစ်းသားခွေးခြေနဲ့ မရိုက်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉ဝ ကျော်နှစ်တွေကလေး မဝင်ရဘူးတဲ့လူကြီးတွေ ဝင်ဝင်သွားကြတဲ့ ဗွီဒီယိုရုံရမ်ဘိုမဟုတ်တဲ့ မင်းသားတွေသိပ်ဆင်းရဲတဲ့ မင်းသမီးတွေကိုချောင်းကြည့်ခဲ့ရတ ...
မန္တလေး – သော်တာစံ(ကလေး)
.​ရွှေမန်းတင်​​မောင်​ကို သတိရတယ်​မြို့မငြိမ်းကို မ​မေ့​သေးဘူးလူထု​ဒေါ်အမာကို လွမ်းတ​နေဆဲသူတို့ ဂုဏ်​သင်းရနံ့​တွေ​ခေတ်​အဆက်​ဆက်​ အရှိန်​အဝါမပျက်​ဒါပဲ​လေ …အနုပညာဆိုတာ သတ်​လို့မှ မရတာ။သော်တာစံ(ကလေး) ...
ယံဇငြိဏ်း – အကာမဲ့တဲ့ စိတ်
.သိမ်ငယ်စိတ်က ဝိဉာဉ်တကောင်လိုငါ့ကို ဝင်ပူးသွားပြီငါကြောက်တယ် ချစ်သူ မုန်းသွားမှာကို ကြောက်တယ် အရေပြားတွေ နာကျင်မှာကို ကြောက်တယ် ကလီစာတွေ ထိုးဆွခံရမှာကို ကြောက်တယ် အိပ်မပျော်မှာကို ကြောက်တယ် တယောက်ယောက် ငါ့ကိုချန်ထားခဲ့မှာကို ကြောက်တယ် အက်စီးဒင့် ...
ညိုခန့်​ကို(သက္ကယ်​ကျင်း) – နှစ်​​ဟောင်းဟာ ဖတ်​ပြီးသား စာမျက်​နှာဖြစ်​​နေရမယ်​
.မ​နေ့က ဖြစ်​ခဲ့ပြီးတာကို ဆင်​ခြင်​တုံတရားနဲ့ ပြန်​ဖတ်​ရမယ်​။ငါတို့ရပ်​​နေတဲ့ လက်​တံထက်​မှာ​ပြောင်းလဲခြင်း ​ခေါင်းစဉ်​​တွေနဲ့​ပြောင်းလဲမသွားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာအံ​သေ​နေတဲ့ လက်​ပဲ။သင်​ခန်းစာ​တွေ မ​ကျေကြ ​သေးတာလားလူတချို့​တော့ ညက်​ညက်​​ကြေေ ...
ဒီလူည – လူနာ (၅)
.ပြတင်းပေါက်လေးက ဝင်လာတဲ့ အလင်းကိုကြည့်ပြီးနေ့နဲ့ ညရဲ့ အကူးအပြောင်းကို မှတ်သားထားရတယ်အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေတဲ့ အသံကို ကြားနေရတယ်ခုလို လှုပ်ရှားသွားလာဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးထဲ မိုးစက်လေးတွေကျလာပုံက လှပလွန်းတယ်ငယ်ငယ်တုန်းက မိုးရေထဲေ...
ကျေးလက်လူငယ် – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.ခါးမှာထိုးထားတာကမြေ့နေအောင်သွေးထားတဲ့ ဓားနှလုံးသားမှာထိုးထားတာကမြေ့နေအောင်သွေးထားတဲ့ ရိုးသားမှု။ဝါးကိုချွန်ပြီး စိုက်တတ်သလိုလေကိုချွန်ပြီး စိုက်တတ်တယ်။လက်နဲ့ စီယာတိုင်ကိုင်ပါးစပ်နဲ့ ဂီယာထိုးကြိမ်တုတ်နဲ့ လီဗာဆွဲတယ်ဘယ်တိုင်ညာလှည့်အင်ဂျင်တပ်ကားကို။ ...
လင်းသက်ငြိမ် – မင်းအစား ငါမောတယ်
.အရမ်းကြီး မပြေးနဲ့လေအမြင့်ကြီး မတက်နဲ့ပေါ့အချီကြီး မကြံနဲ့လေဇယားကြီး မရွှေ့နဲ့ပေါ့အကွက်ကြီး မလှမ်းနဲ့လေအပိုင်ကြီး မချုပ်နဲ့ပေါ့ကြောင်တိုင်းဟာ ကြောင်ကျ ကျဖို့လွဲချော်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေ ရှိမှာပဲလှိမ့်ရင်း လှိမ့်ရင်း မစင်နင်းမိတဲ့ဘီးတွေလည်း အများကြီးပ ...
ဂိုးဂိုး(မောရမြိုင်) – အဝါရောင်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်
.ကိုယ့်ကိုလိုအပ်လာတဲ့အချိန်တိုင်းသခင့်ရဲ့အမိန့်ကို နာခံဖို့အသင့်စောင့်နေတဲ့ ကျွန်လိုအဝါရောင်ဟာ ကိုယ့်စိတ်လောင်ကျွမ်းမှုရဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်ရဲ့ကိုယ့်စိတ်ညည်းသံများကို အမြဲတမ်းအဖေါ်ပြုပေးနေကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်များဟာ အမြဲလိုမှောင်မိုက်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းနေဝ ...
ဖိုး​ရွှေညီမှိုင်း – သီချင်းဆို၍ …
.“တရားမျှတ လွတ်​လပ်​ခြင်းနဲ့မ​သွေတို့​ပြေ တို့​မြေများလူခပ်​သိမ်း ငြိမ်း ချမ်း ​စေ ဖို့ခွင့်​တူညီမျှ ဝါဒ ဖြူစင်​တဲ့​ပြေတို့​ပြေ တို့​မြေပြည်​​ထောင်​စုအ​မွေ အမြဲတည်​တံ့စေအဓိဌာန်​ပြုမ​လေထိန်း သိမ်း စို့ ​လေ …”(မြန်မာတို့ရဲ့ …​နိုင်​ငံ​တော်​သ ...
မင်းကို ငါဆေ့ထားပြီ ရီရီ – ဖုန်းမောင်
.ကမ္ဘာကြီးက မိုနာလီဇာကို ဆေ့ထားသလိုမင်းကို ငါ ဆေ့ထားပြီ ရီရီ။ငါ ကြိုက်တဲ့ မင်းကဗျာတွေ ဆေ့ထားမှာပဲ။ငါ ကြိုက်တဲ့ မင်းဓါတ်ပုံတွေ ဆေ့ထားမှာပဲ။ငါ ကြိုက်တဲ့ မင်းသီချင်းတွေ ဆေ့ထားမှာပဲ။ကဗျာတွေ ဆေ့ခဲ့လို့ ရှယ်လီရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဖောက်ထွင်းမြင်ရတယ်။ပန်းချီတွေ ...
ဧညိမ်းဝေ – မနက်ဖြန်ကို ဖြန့်ကြည့်ခြင်း
.မြစ်က မြစ်လို စီးတာ ဓမ္မတာပါပဲငှက်တကောင်ရဲ့ အတောင်ပံထဲဘယ်ခရီးစဉ်က ဦးစားပေး အစီအစဉ်ဆွဲရမလဲဘရိတ်မပါတဲ့ အတွေးထဲပျံသန်းမှုဇုံက အနားသတ်မဲ့နေတယ်အမှောင်ကို ဓာတ်မီးနဲ့ထိုးတိုင်းဘတ္ထရီက ဒေါင်းနေတာဘဲလေယာဉ်ပျံကို တုတ်ထောက်ခုန်ရင်းပြုတ်ကျလာတဲ့ ခဲက အသဲပိုမာလာတ ...
သုခုမ – မင်းချောမြင့်
.နာကျင်ဖွယ်ရာပါစမ်းချောင်းလေးတွေဆီက သိုမှီထားခြင်းပါဗဟုသုတတွေက သိပ် လူတွင်ကျယ်လုပ်တာပဲရင်ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်အိပ်မက်တွေက ဆည်တွေ ကျိုးကျလာသလိုမျိုးငါလည်း မအောက်မေ့ ဖြစ်ပါဘူးခုတလော ကြားကြားနေရတယ်အသံတွေ ငယ်ကုန်ပြီအော်ရ ဟစ်ရငါတို့ တင်မယ့် ကုန်တင်ကားပေါ်မှာ ...
သူလွမ်း – မေးခွန်းများ
.ဝေနေတဲ့ သစ်ရွက်တွေနဲ့ကြွေနေတဲ့သစ်ရွက်တွေဘယ်ဟာက ပိုများမယ်ထင်လဲကမ္ဘာကြီးမှာ…ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ် မသိလည်းငါတို့ ဆက်လျှောက်ရဦးမယ်ပွန်းတကောင်ထဲနဲ့လည်းဘုရင်ကို သတ်လို့ရတာပဲပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ ကံကြမ္မာ ရှိတယ်ဉာဏ်ပညာ ရှိတယ်သေသွားတဲ့ သူတေ ...
မိုးသက်ငြိမ်ဦး – မီးသတိပြု
.အသွားမတော် တလှမ်း အပြောမတော် တခွန်းအတွက် မီးကို သတိပြု။ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောနွေရာသီကျရောက်ပြီဖြစ်ပါသဖြင့်မီးကို သတိပြု။မီးကျင့် မီးကြံ ကြံတတ်လို့မီးကိုသတိပြုရတယ် မီးကြွင်း မီးကျန် ကျန်တတ်လို့မီးကို သတိပြုရတယ်။ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ ဖိုမ တွေ့ရင်မီးဟာ လော ...
ညီဆူးသစ်​ – စစ်​​ဘေးကြီးက ​ရှောင်​ခဲ့ပြီး​​နောက်​
.​ရေ​တွေ ခမ်း​တော့မယ့်​ဆို ဒီ​မြေ​ပေါ်မှာပဲဒီလူ​တွေမှာ ​ကျောတပူပူ ဒီရာသီထဲမီး​တွေ ထ​တောက်​ရင်​လည်း ကူကယ်​ရာမဲ့ ​ရေ​တွေ ခမ်းရင်​လည်း ဒီ​မြေ​ပေါ်မှာပဲ ဓာတ်​ပုံမြင်​လို့ အ​ထောက်​ထားခိုင်​လုံတယ်​ထင်​ပြီးမ​ယောင်​ရာ​တွေနဲ့ ​ယောင်​​ခြောက်​ဆယ်​ ငါတို့ ...
မန္တလေး(၅) – သော်တာစံ(ကလေး)
.လက်​​ကြော မတင်းလို့လူ​မွေး လူ​ရောင်​ မ​ပြောင်​တယ်​စိတ်​​ကြော မတင်းလို့မြို့ပြင်​မှာ တင်းခံကြရတယ်​ပျင်း​ကြောကို ဆွဲဆန့်​​နေရင်​​နောက်​ထပ်​ …အသက်​​သွေး​ကြော​တွေ​ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်​မယ်​အသက်​​သွေး​ကြော​တွေ မရှိရင်​ငါတ်ို့ဘာနဲ့ အသက်​ဆက်​ရှင်​မလဲ ...
ဝေဖန်လို့ ရပါတယ် – ကာတွန်း Kzzh
Credit @ Kzzh ...
ထူးခြားဖြစ်စဉ် – ဧညိမ်းဝေ
.တရားမဝင်တာများတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတယ်သံသယက ဆိုဒ်အပြည့်နဲ့မျှောစာမလိုဘူးအလိုလိုပေါက်လာတဲ့ ခြေထောက်ကအေသင်မြို့ဘဲ ရောက်သွားတော့မလိုအကြံအဖန်က ကွာလတီအပြည့် မှန်နေတယ်ဈေးစစ်စရာမလိုတဲ့ခေတ်မှာလက်မှတ်တချက်ထောက်တာနဲ့ချလံက ကျပျောက်ခဲ့ပြ ...
ထွန်းကို – တိမ်တွေလှတဲ့ ရာသီ
.ဖြတ်​ဝင်​လာတဲ့ ​လေရူးဟာတမာန်​​တော်​ပဲခရမ်းရင့်​ရင့်​ အလင်းထဲဖျပ်​ဖျပ်​လူး​နေတဲ့ တိမ်​​တွေအသက်​တမျှရက်​လွန်​ ရွက်​စုတ်​ပြက္ခဒိန်​တ​ခုနံရံ​ပေါ်မှာ အိမ်​​မြှောင်​တ​​ကောင်​ပူ​လောင်​ပြင်းပြမိတယ်​ရှုမဆုံးဖွယ်​ ​တောတန်းက​လေးထဲတိုးဝင်​​နေတဲ့ ​မြေနီလမ် ...
မိုနေးသစ် – ကျောက်ထု
.ဒီအတိုင်း​ကျောက်​ခဲ​တွေ ထုထု​နေတဲ့ မြို့မဟုတ်​တာ​တော့ ​သေချာတယ်​။အ​ရေးအသားနဲ့ ယဉ်​​ကျေးမှုအရ​ကျောင်းကြီးရှင်​ချစ်​​ယောဘုရားကြီး​ရောက်​ဖို့ လက်​နှစ်​ကမ်း အလို။ချည်​​ချောင်းရဲ့​ကျောက်​စရစ်​ခဲ​တွေနဲ့လမ်းသား​ယော​ချောင်းရဲ့အ​ဝေး​ပြေးဖြတ်​ဝင်​သွ ...
ဇာတ်ခုံဇာတ်ညွှန်းများနဲ့ အကယ်ဒမီရှော့ – နရီမြိတ်
.ဘဝ အခန်းဆက် ဇာတ်ညွှန်းများနဲ့သံသရာဘဝရဲ့လောကဇာတ်ခုံပေါ်တချိန်က ဘီလူးအဖြစ် ကပြဒီဘဝတော့ မင်းသားတချိန်က အမတ်ကြီးအဖြစ် ထွက်လာသူနောင်တချိန်မှာ တံခါးမှူးအဖြစ် ကပြတချိန်က ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သူနောင်တချိန်န်မှာ ဖုန်းတောင်းယာစကာအဖြစ် ကပြတချိန်က ဓားပြ အဖြစ်ကပြသ ...
လွမ်းသင်္ခ(ပျဉ်းမနား) – နေသားကျ သစ်ပင်
.မက်လုံးတွေ မိုးလောက်ကြီးပေးပြီးရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကမိုးတစက်လောက်…။တကယ်တော့မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒတွေအောက်မှာငါတို့ဟာ အသားကျနေသူတွေလေ…။အိပ်မက်တွေကိုဖြစ်လာလေနိုးနိုးနဲ့ မိုးမျှော်တေးတွေဆိုလို့..။ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အင်္ကျီလိုဘယ်အချိန် ခေါက်ခေါက်ဒီ ...
ပုဂ္ဂလိက မူကြိုသင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ – ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ)
.သိပ်မပျော်ပါဘူးသွန်ပြီး မယုံပါဘူးလွန်လွန်ကဲကဲ ပုံမအပ်ဘူး။ငါတို့ထုံကျဉ်နေပြီလေ။မနေ့ကလိုကိုယ့်သစ်ပင် ကိုယ်စိုက်ငါတို့ဟာလူထုမျက်နှာမှလွဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မလိုက်။အာဏာရှင်ဆိုလည်း အာဏာရှင်မို့အာဏာတဝက်ရှင်ဆိုလည်း တဝက်ရှင်မို့ငါတို့အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ပေါင်း ...
နှင်းခါးမိုး – စူပါဆန်းဒေး
Posted by: နှင်းခါးမိုး
.မိုးရွာချလိုက်တော့ တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်ကငှက်တွေ ထပျံကြတယ်ဒီည မီးက ပျက်အုန်းမှာလားလမ်းထိပ်အမှိုက်ပုံးတွေဘေးမှာ ကလေးတအုပ်ရယ် ခွေးတအုပ်ရယ်မြောင်းထဲက ရေကတော့ သူ့တရားနဲ့သူတက္ကစီတစီးက မှောင်ရိပ်ထဲမှာ ရပ်နေတယ်လွတ်လပ်တဲ့ လူဆိုတာ မရှိဘူးချက်ကြိုးကိုဖြတ်ပြီးတ ...
ယောဟန်အောင် – မျက်စေ့နာလို့ ရေးတဲ့ ကဗျာ
.ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲဆရာ…ဒီမိုး၊ ဒီရေ၊ ဒီလူတွေကြောင့် မျက်စေ့နာတာ'တနေ့က ဂျိုးဖြူပိုက်ရေထဲ မသန့်ဘူး'ဆိုကတည်းက မျက်သားတွေ ယားယံလာ'လူမကြည့်ပါနဲ့ ပါတီကြည့်ပါ'ဆိုကတည်းက မျက်သားတွေ ယားယံလာမြို့တော်နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေ မြင်ကတည်းကမျက်သားတွေ ယားယံလာထရ ...
ငါ့ကဗျာ – မင်းမျိုးအောင်စံ
.ဤကဗျာသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ဤကဗျာ၏ မြေထု၊ ရေထုနှင့်လေထုတို့ ပါဝင်သော နယ်နိမိတ်သည်ဤကဗျာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ဖြစ်သောနေ့တွင်တည်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ဤကဗျာ၏ နယ်မြေအပိုင်းအခြားဟူသမျှသည်ဤကဗျာမှ မည်သည့်အခါမျှ ခွဲမထွက်ရ ...
.​နွေမှာပွင့်​ကြတာချင်းတူ​ပေမယ့်​အဝါ​ရောင်​ချင်းတူ​ပေမယ့်​တန်​ဖိုးထားမှု​​တွေကမတူ​နိုင်​​လေ​တော့ပိ​တောက်​က​တော်​ဝင်​ ပိ​တောက်​ဖြစ်​ခဲ့တယ်​။ပိ​တောက်​တဲ့သူ့သဏ္ဌာန်​ သူ့အဆင်းရယ်​က ​​ရွှေဝါ​ရောင်​ ပီပြင်​လို့​မွှေးကြူကြူရနံ့ရယ်​နဲ့နန်းကြိုက်​တဲ့ ပန် ...
ကျော်ဇံလှ – လွယ်အိတ်ကြီးနဲ့ ကဗျာဆရာ
.တမလွန်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားကြတာပေါ့ကဗျာရွတ်စရာရှိရင် သစ်ရွက်လေးတွေလှုပ်ပြလိုက်ပါ ကဗျာရွတ်စရာရှိရင်တောင်တန်းတွေ ငိုပြလိုက်ပါကဗျာရွတ်စရာရှိရင်တောင်ယာတဲလေး မီးခိုးအူပြလိုက်ပါ ကဗျာရွတ်စရာရှိရင်တော်ဝင်ကားကြီး ဟွန်းတီးလိုက်ပါငါ့အတွက်ဘာမှ ဒုက္ခမရှာကြနဲ့ဆိုတဲ့ ...
သန်းဆွေမိုး ကလော သို့ …မောင်ကြူးရင့်
.အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆုံးပြီတဲ့ …ကဗျာဆရာကဗျာ မရေးရင်သေတာနဲ့ ဘာမှ မထူးဘူးငါပြောခဲ့မင်း ကဗျာတွေရေးခဲ့ငါ့ အသဲဟာစဥ့်တီတုံးပေါ်ရောက်ငါး တကောင်လို တဆတ်ဆတ်ခုန်လို့ငါငိုနေပြီ သူငယ်ချင်း။မောင်ကြူးရင့် ၂၅့  ၃့  ၂၀၁၈ ...
သွဲ့ဒီနွယ် – စစ်ကျန်ဗုံးတလုံး သို့မဟုတ် ကမ္ဘာဦးတေး
.ပန်းသီးပင်ကလေးက ယုတ္တိမရှိဘူးတဲ့ပန်းသီးပင်အိုကတော့ ယုတ္တိရှိတယ်တဲ့ပန်းသီးလေးတွေအနေနဲ့ ယုတ္တိဖြစ်နေတော့နယူတန်ရဲ့စည်းမျဉ်းဟာ မှားသွားတယ်အလက်ဇန္ဒရားက နိုင်ပွဲချည်းဆိုတော့ မနိုင်ပါဘူးထားပါရေသောက်မြစ်ကလေး ခြစားခံလိုက်ရတာ အုတ်နံရံပေါ်က တွယ်ကပ်ပန်းပင်မသိဘူ ...
ဖိုးရွှေညီမှိုင်း – ရပါတယ် …
.လက်​ခုပ်​သံ​တွေ လိုချင်​လား​ထောက်​ခံအား​ပေးမှု​တွေ လိုချင်​လားသူတို့အကြိုက်​ လိုက်​လုပ်​​ပေးပါ။ဘယ်​​တော့မှ မ​သေတတ်​တဲ့သူတ​ယောက်​လိုမျိုးခပ်​တည်​တည်​နဲ့ အသစ်​​တွေ လုပ်​ပြပါအစစ်​အမှန်​ဘဝဆိုတာ​တွေအားလုံးကို မျက်​ကွယ်​ပြုပါ။သူတို့ကို လိမ်​​နေမှန်း ...
ဖုန်းမောင် – ငါ တယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖို့ လိုနေပြီ
.အမြင်မှာပေါ့ပါး လွတ်လပ်သူလို့ ထင်ရ။တကယ်တော့ပြိုလဲကျမသွားအောင်တောင့်ခံထားရတဲ့ အခြေအနေ။ခေတ်ရေစီးမှာ တိုက်စားခံနေရတဲ့ ဘဝ ကမ်းပါးတွေကို ကြည့်ပြီးနှလုံးသားတွေ တလွှာချင်း လွှာချခံနေရသလို။ဘယ်သူ့ကိုမှ အသံထွက်ပြီး စကား ကျယ်ကျယ် မပြောပါဘူး။ဆရာဝန်ကသာ ဒီလူနာ ...
ဦး သန်းဆွေမိုး …သို့ – အောင်နှင်းသစ်
.သူ Rain Cafe ထဲ လှမ်းဝင်လာပုံသူ ကိုယ့်ပခုံးကို လှမ်းဖက်လိုက်ပုံသူ့ကားကြီးနဲ့ကိုယ်ပါ ပါသွားပုံသူ့ အိပ်ကပ်ကြီး နှိုက်နှိုက်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဖိုး ချောကနဲပေးပုံ`စပယ်ရှယ်ပဲ´`ဟ သောက်ကျိုးနည်း´သူ ပြောခဲ့သမျှထောင်ထဲက အကြောင်းအချို့ကို`ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာရဲ့အပြင ...
မန္တလေး(၄) – သော်တာစံ(ကလေး)
.ထင်ရှားတဲ့​ အမှတ်​တံဆိပ်​က​ရှေး​ဟောင်းယဉ်​​ကျေးမှုအ​မွေအနှစ်​များနှစ်​​ထောင်​ချီ​ ရောင်​ပြန်​ဟပ်​တာကသာသနာ့ ကိုယ်​​ရောင်​ကိုယ်​ဝါများအစိုးရိမ်​ဆုံးကဒီ … အိုက်​ကွန်*​နှစ်​ခုလက်​လွတ်​ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုပဲ။​သော်​တာစံ (က​လေး)၁၀ ၀၃ ၂၀၁၈*(Icons) ...
.သူတို့နဲ့ကျနော် လူချင်းမသိ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူတို့ကဗျာတွေကို အသံလွှင့်ခဲ့ဖူးတယ်။ကဗျာဆရာနှစ်ယောက်ရိုးဒီ၊ သန်းဆွေမိုး(ကလော)။ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာကဗျာဆရာတစ်ယောက် ကွယ်လွန်ခြင်းဟာနေတခြမ်း ပဲ့ကျသွားတဲ့ သဘောလတခြမ်း မှောင်သွားတဲ့ သဘောပဲ။ကဗျာဆရာအဖြစ်ချစ် ...
အကျအဆုံးများလှချည့်(သန်းဆွေမိုး-ကလော) – ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ)
သော်တာစံ(ကလေး) – မန္တလေး(၃)
.​ဝေဒနာ​တွေအ​ဖြေရှာမရတဲ့အခါကျုံး​ရေထဲမှာ​မျှောပစ်​တယ်​အဲ့ဒီ ကျုံး​ရေကိုပဲငါတို့​သောက်​သုံး​နေကြရတယ်​။​သော်​တာစံ (က​လေး)၁၀ ၀၃ ၂၀၁၈ ...
မောင်ရဲနွေ(ပလိပ်) – ကဗျာဆရာကြွေခြင်း(ရိုးဒီ)
.သစ်ရွက် ကြွေသလိုကဗျာဆရာတွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေနေတယ်…။ကဗျာဆရာ ကြွေပေမယ့်ကဗျာတွေ ဝေနေတယ်…။ကဗျာ ဘယ်တော့မှ မသေဘူးကဗျာ ဘယ်တော့မှ မကြွေဘူး..။မောင်ရဲနွေ ပလိပ်၂၅.၃.၁၈ ...
မောင်ရဲနွေ(ပလိပ်) – ကဗျာဆရာကြွေခြင်း(သန်းဆွေမိုး-ကလော)
သော်တာစံ(ကလေး) – မန္တလေး(၂)
.“ ငါ မမူး​သေးဘူး​ဟေ့မန်း​လေးကျုံး​ရေမခမ်းသ​ရွေ့....” လို့ဘိုထီးဆိုခဲ့ဖူးရဲ့ငါတို့ မမှုဘူးဟေ့မန်းကျုံးကြီးမပျက်​စီးသ​ရွေ့ လို့ဆက်​ဆိုကြမယ်​ငါတို့ …မျက်​ရည်​​တွေကျရင်းပျော်​​ပျော်​ပါးပါး​ပေါ့ … ။​သော်​တာစံ(က​လေး)၁၀ ၀၃ ၂၀၁၈ ...
ရုပ်သေး – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.အခု သမ္မတကြီးကရုပ်သေးဆိုတော့အရ င်သမ္မတကြီးကရုပ်သေး မဟုတ်ဘူးလား။မင်းသားရုပ်နဲ့ ရုပ်သေးနဲ့ဘီလူးရုပ်နဲ့ ရုပ်သေးပဲ ကွာတာ မဟုတ်ဘူးလား။မင်းသားကကို မကြိုက်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဘီလူးကကို ကြိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းသားကကို ကြိုက်တယ်ဘီလူးကကို မကြိုက ...
ဝိုင်းစု – မင်းချောမြင့်
.အလေအလွင့်တွေပဲ စိုက်ပျိုးမိတဲ့ အချိန်မှာ နုပျို မှုဟာ ငါနှင့် တဖြေးဖြေး ဝေးလာခဲ့ရပြီ။ ရိတ်သိမ်းချိန်တွေလွန်သွားတော့ ပါးပါးလေး ရင့်ကျက်ရတော့မယ့်အရွယ်မှာ သဘာဝကိုဟန်ဆောင်ပြီး အခါလွန်ပွင့်လာရတဲ့ ပန်းတွေရဲ့ ညှိုးငယ်ခြင်းမျိုး။တချိန်ကျ တိုက်စားသွားရမယ ...
နရီမြိတ် – အကယ်ဒမီပွဲတက်လာတဲ့ သေမင်းနဲ့ သမ္မတ
.သမ္မတရွေးမတဲ့လားအချိန်က(၇)ရက်ရသတဲ့လားအကယ်ဒမီပွဲတက်ဖို့တဲ့လားအချိန်ကကပ်နေပြီဆိုလားစိန်ခေါ်မှုတွေကအုတ်အော်သောင်းတင်းတဲ့လားငြိမ်းစုစီဥ(ဥပဒေ)ကိုပြင်လိုက်ပြီတဲ့လားလော်ဘီတွေပြာသီးရိုက်တဲ့ကိစ္စပဲတခါတခါစဉ်းစားကြည့်တယ်ငွေပေးရင် ဘာမဆို လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ကော ...
ဧညိမ်းဝေ – ပြုန်းတီးသွားတဲ့ အပျော်
.သစ် မလာတဲ့ဘဝမို့ ဝါးနဲ့ပေါင်းကွပ်ထားရကောင်း မလာတဲ့ အိမ်စုတ်ကလေးက သစ်ခုတ်သမားရဲ့ နန်းတော်ပါပဲသစ်ပင်ထဲ စိုက်ချလိုက်တဲ့ ဓားနဲ့မျှော်လင့်သမျှကို သင်းသတ်ပေးရအဆင်မပြေတာက အလျဉ်းသင့်သလိုမကြာမကြာ အလည်အပတ်လာတယ်လောကဓံကပဲ ဧည့်ခံရတာများလို့လားသစ်ခုတ်သမားရဲ့ ...
ခင်လွန်း – ကြည့်မော ကျီးမော
.မနက်ဖန်ကမ္ဘာ့ ကဗျာနေ့တဲ့ငါ့ နှလုံးသား ဆား ပက်ထားသလိုကဗျာကြီးရယ်ကမ္ဘာကြီးရယ်ငါ့ကို ဘာကြောင့်များတကျွန်းပို့ထားပါလိမ့်ဘောင်ဘင်တွေသာ ခတ်ပါရဲ့ကမ်းကရောက်, မရောက် နိုင်တော့ဘူးငါ့ အလွမ်းမိုင်နဲ့ဆိုငါ့ ကမ်း ငါ ကပ်ဖို့ရာဘယ်လို နတ်ဆိုး ဝှက်ထားထားစိတ်ဟာေ...
စိုးနေလင်း – မပစ်ချင်တဲ့ မြား
.တချို့တော်တော်ပြောတယ်လွယ်တယ် အမေးနွားကျောင်းသား။ပြန်ကြည့်လိုက်တော့…အလျှော့ပေါ့ဆုံး စဉ်းစားရင်တောင် အိမ်ခေါင်မိုးကို လက်ညှိုးထိုးဖို့မဆိုထားနဲ့တံစက်မြိတ်ရဲ့အနားသတ်မှာရပ် ရင်တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေကြပုံ။ခက်ပုံများသားရဲမဲ့သော တောလည်ထွက်မြင်းဇက်ကို လျှော့ ...
မိုနေးသစ် – အနှိမ်ခံ
.အသံကိုသော့ခတ်ထားတာပဲ ကောင်းပါတယ် မြင့်ရာကနေ နိမ့်ရာကိုမစီးဆင်းတဲ့ မြစ်တွေအကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဖူးတယ် ကျောက်ခဲအောက်မှာ ခြတွေအုတ်ခဲအောက်မှာ ခြတွေကွန်ကရစ်အောက်မှာ ခြတွေခြေချစရာမရှိတဲ့ ခြတွေပုန်းကွယ်နေရတယ် အနှိမ်ခံဖက်မှာဘယ်သူမှ ရှိမနေတာကသဘာဝကျပါတယ်။မိုေ ...
.အဲဒီ့ ဆာ(လ်)ဖာရီယို ကိုကျွန်တော်တို့ မတွေ့ရှိခဲ့ကြသူ့ လိပ်စာအတိုင်း သွားခဲ့ကြသူ့လိပ်စာမှာသူ့ ဂူသင်္ချိုင်းကျောက်စာမှ ကူးယူသည်ဂူသင်္ချိုင်းတွင်လိပ်စာပါ ရေးထိုးသူ ဟူ၍သူတဦးတည်းသာ ရှိမည် ထင်၏အသက်မည်မျှဟု မပါရှိချေသို့နှင့်ပန်းသီးတကိုက်စာ လမ်းများရက်သတ ...
မင်းချောမြင့် – ပေါင်းလောင်း
.ကမ်းခြေကို အနားသတ်လိုက်ပြီးလူတွေ ဉာဏ်ကောင်းလိုက်ပုံများပြိုကျ လိုက်မလား လို့မြစ်ကို စောင့်ရတယ်ဆည်းလည်းခတ်သံ ညဲညံနက်ဒီဘက်မှာ လောကီ တောင်တွေ လိင်ဆက်ဆံ ခံရတာများမီးခိုးတွေ အူနေ … … … မင်းချောမြင့် ...
ကိုပွေး – အာလူးထမင်းနယ်
.အာလူးတော့ မသိဘူးအားလုံးတော့သိတယ်ပါးပါးလေးလှီးပြီး ထုံးရေကြည်ထဲ စိမ်ရမှာမဟုတ်လား ကြွပ်ဖို့ ရွဖို့ ရေ အနေတော်ထည့်ပြုတ်မှ နပ်မှာလေ.နူးနူးအိအိဖြစ်ဖို့မင်းအထုအထောင်းက အဖိတ်အစင်များတယ်မြေကြီးထဲမှာရှင်ပြီး မြေပေါ်မှ သေကြ ကြေကြကျကွဲတဲ့ ဗုံးဆံအခွံကချိုးရ ...
မှော်ဆရာ – ထက်လူအောင်
.နေရောင်က ပူပြင်းလွန်းတယ်အရွက်ဖားဖား သစ်ပင်လေးလိုငါ ဟန်ဆောင်လမ်းထောင့်မှာ အရိပ်လေးပေးမယ်ကလေးတွေ လာကစားတဲ့အခါသစ်သီးတွေကို ခြွေချပေးလို့စစ်ပွဲတွေများပြားလွန်းတယ်တူတလက်လို ငါဟန်ဆောင်သေနတ်ပြောင်းတွေကိုရိုက်ချိုးပစ်မယ်စစ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်တွေ ...
.ဘုရားပေးသောလက်ဟာ မာရာဒိုနာပုံ တက်တူးနဲ့မသန့်မရှင်း အောင်ပွဲခံခွင့်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာမှာငါနေထိုင်ရမတရားမှုမှာ လက်ခုပ်သံတွေရှိနေလို့ လက်ခုပ်သံတွေကို သံသယဝင်မိတာ မှားသွားလားဆေးထိုးတဲ့ ဆရာဝန်က တယောက်တည်းဆေးမှားထိုးခံရတဲ့ လူနာတွေက တပုံကြီးဘုန်းကြီးကျောင်း ...
အရိပ်များ – အံ့ဘွယ်ဟိန်း
.ပွင့်ခဲ့ပြီးသား ဘုရားဆီမှာမပွင့်သေးတဲ့ ဘုရားအတွက် ဆုတွေတောင်းလို့ဒီခရီးဒီလမ်းက သွားမှန်းသိသားနဲ့ရှေ့ကားလည်း မမီဘူးနောက်ကားလည်း မမီဘူးသေမှအေးမှာပါကွာ ဆိုတော့ရှင်သန်ရတာ ပူလောင်နေမှာပဲကျွန်တော့် စိတ်ကိုအဲဒီ လမ်းပေါ်အသာလေး ကွေ့ ချမောင်းနှင်လိုက်တယ် ...
ညီသစ်လူ – အသံမပီတော့တဲ့ မြစ်
.ငါတို့ဟာ မနက်စာနဲ့ ညစာကိုပေါင်းစားရင်းစပါးခင်းတွေအကြောင်း ပြောခဲ့ဖူးတယ်ငါတို့ဟာ ကေသရာ ခြင်္သေ့မင်းရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်မှာ အလန့်တကြားပွင့်ခဲ့ရတဲ့ပန်းတွေလေငါတို့ဟာ ဒီနေ့စိုက်ပြီး နောက်နေ့ခုတ်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့ရွက်ခြောက်ပင်တချို့လည်းဖြစ်တယ်ငါတို့ရ ...
ဝါကျဖြူ – မှတ်ဉာဏ်ဟောင်း
.ကားလမ်းမ​တွေ​ပေါ်မှာ ခို​တွေ သွယ်​တန်းထားပုံကဓာတ်​ကြိုး အ​ဟောင်းနဲ့ ဓာတ်​မီးတိုင်​ အသစ်​​တွေပိတ်​ထားတဲ့ နံရံ ရဲ့စကားသံနဲ့ငါ့​ခြေဖဝါးကို ငါ လွှာထုတ်​ကြည့်​မိတယ်​မ​နေ့က ​လျှောက်​​နေခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမှိုစွဲ​နေတဲ့ငါ့ မှတ်​ဉာဏ်​​တွေက ရက်​စက်​လွန်းတယ် ...
လင်းနွေးအိမ် – အလံပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရာ
.ညီမလေးရေဒီနေ့ဟာ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့တဲ့လာဗုံးသံအမြှောက်သံတွေဖုံးလွှမ်းအောင်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးကဗျာ ဟစ်ကြွေးကြစို့။ခြေပြတ်ထားတဲ့မောင်လေးကို ညီမလေးကချီအကိုက ငါတို့မောင်နှမတွေအတွက် ရိက္ခာတောင်းနဲ့ အင်္ကျီဟောင်းတွေသယ်ခဲ့မယ်။ရွာမှာမကောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒို့မိဘ အလောင်းေ ...
စိုးရိမ် – တင့်ကား
.တင့်ကားဟာ တင့်ကားလို့ သိပြီးနောက်ဒီပြဿနာအားလုံး ဖြစ်ခဲ့တယ် တက်ခဲ့တယ်တင့်ကားဟာ သူ့ကိုယ်သူ တင့်ကားလို့ မသိတတ်သေးချိန်မှာတင့်ကားဟာ ယုန်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်တင့်ကားဟာ တင့်ကားဖြစ်ကာစအရာရာကို တွေးကြောက်ခဲ့တယ်မြေညှိစက်ကို ကြောက်တယ် နင်းခြေပစ်မှာစိုးလို့ဆွြဲေ ...
ခင်မင်းဇော် – မဲဆောက်
.ဒီမြို့လေးကိုချစ်ခင်ခြင်းကနေ့နေ့ညည မေ့မရခဲ့ဘဝတွေထဲကိုယ့်နေရာ ကိုယ်ဘာလဲ သိစေတဲ့မြို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ထင်ကျန်ရစ်စေတဲ့မြို့မတူကွဲပြားမှုတွေကို စတင်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့မြို့။ဒီမြို့လေးမှာအပူအပင်တွေနဲ့ ဘဝစကြသူတွေရှိသလိုအပူအပင်တွေနဲ့ပဲ ဘဝချုပ်ခဲ့ရသူတွေရှိ ...
နေဇော်နိုင် – လွဲလွဲကြီးတွေဆို စိုးရိမ်တယ် ချိုမြတင်
Posted by: နေဇော်နိုင်
.ငါတို့ စကားပြောလို့ ရလားမင့်ဖုန်းဘေးမှာ ဘယ်သူတွေ ရှိနေလဲမင့် ဖ ဘ ထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါနေလဲငါ လွဲလွဲကြီးတွေဆို စိုးရိမ်တယ် ချိုမြတင်အခု ဖုန်းပြောနေချိန်မှာMask တပ်ထားသေးလားဆီးရီးယားက သေနတ်တွေ ငါတို့ ဆီရောက်နေပြီလားသူ့ ကိုယ်သူ မသတ်ခင် သူများကိုသတ်ပြီ ...
နရီမင်း – ရေငတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ
.ရေသန့်စက်ရောင်းသူဟာသေးပေါက်ပြီး သူ့သေးကို စက်ထဲထည့်သူ့ဘာသာ ပြန်သောက်ပြတယ်။ဒါက ကိုယ် ပြောတဲ့စကားကိုယ် ပြန်လုပ်ပြဖို့လောက် မခက်ပါဘူး။နိုင်​ငံ​ရေးသမားတွေဟာ ရေသန့်စက်လောက် စိတ်မချရဘူး။သူတို့စကားတွေကို ရေသန့်စက်ထဲ ထည့်ကြည့်တာရေတစက်မှ ကျမလာဘူး။ငါတို့ ...
မောင်လွမ်းဏီ – အမာရွတ်
.ကျေးဇူးရှင်ကထမင်းခွန့် ကျွေးတယ်ဝတ်ကျေ တန်းကျေ။သမိုင်းကခွန့်ကျွေးတာ ကဗျာတွေဆား မပါဘုး။မောင်လွမ်းဏီ၂၁ မတ် ၂၀၁၈။https://www.facebook.com/lwanni ...
အမှန်တရားက ဖိနပ်မပါဘူး – နှင်းခါးမိုး
.တုပ်ကွေးကချောင်းနေတယ်.နှာခေါင်းစည်းတွေက မြောင်းထဲမှာပိတ်ဆို့နေပြီကျွဲအုပ်ကြီးက ခရီးဆက်မပျက်သလိုခြင်္သေ့တွေကလည်း လစ်တဲ့ကောင် ၀င်အဆွဲမပျက်ဘူးအသက်ရှင်နေရတာကိုက အန္တရယ်မကင်းဘူးဆိုတဲ့ဘ၀ကို ငါတို့လက်ခံလိုက်ကြရမှာပဲငါတို့က ငါတို့လိုချင်တာကို မျက်ခြေပြတ်ြ ...
ပွင့်သစ်(ကရိန်ကန်) -ကောင်းထက်အတွက် ကဗျာ
.မြစ်ဟာစီးဖို့ဘဲ..စီးတော့….။မင်းသယ်မယ့်လမ်းဟာ မင်းထမ်းထားသလိုမင်းပုခုံးပေါ်မှာသူ စောင့်ကြည့်နေတယ်Antique ကြီးတွေလား ပေ့ါ..ဒီမှာ…..။အံမ၀င်တဲ့ လောကထဲအံဝင်အောင် များများ မလိုဘူးအမှန်တရားကိုချစ်သစ္စာတရားကို ချစ်တချို့အဖြစ်တွေကိုဥပက္ခော ထား… တချို့လောကပ ...
ဆက်အောင်နိုင် – အနာဂတ်နိုင်ငံတော်
.မီးခြစ်ဆံ အဆံမဲ့စီးကရက် ဗူးခွံပေါ်ခြေထောက် တဖက်တင်ကဗျာဆရာ ဖြစ်နည်း။တံဆိပ်ခေါင်း ငါးပြားဖိုးအသေးစိတ် ပြန်ကြားဂန္တ၀င် ဂျာနယ်မော်ဒန် ပလာဇာစာတိုက်သေတ္တာနံပတ် - ၁၃ရှေး ခေတ်ဟောင်း အမွေ။လက်ကျန် တမျိုးမျိုးစာအုပ်တအုပ် အချပ်ပို ထည့်ပေးယူရေနီယံ သတ္တုတူးနတ်မြ ...
အောင်သာငယ် – တံခါးခေါက်သံ
Posted by: အောင်သာငယ်
.အိမ်လွမ်းနေတဲ့ တောင်တန်းကြီး... တဖြည်းဖြည်းချင်း ကျော်လွှားတက်လိုက်တော့တိမ်လွှမ်းနေတဲ့ တောင်တန်းလေးများ မျက်စေ့ တဆုံးတလျား တွန့်ခေါက် ကြေကွဲ နာကျင်လို့...နောက်လှည့်ပြန်တာ မဟုတ်ဘူး... သံလိုက်အိမ်မြောင် မှားနေတာ...လမ်းလွဲသွားတာ မဟုတ်ဘူး... နေမုန်တိ ...
သား – ကမာပုလဲ
Posted by: ကမာပုလဲ
.ကျနော့်လက်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီးခုန်ချသွားတယ်လွတ်သွားလို့ မဖြစ်ဘူးအတူ လိုက်သွားလို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး ….။သူ့နောက်မှာကျောချင်းကပ် ရပ်နေတဲ့ သူ့ရဲဘော်အိမ်ရှေ့မှာကိုတင်အောင် မနက်တိုင်း လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကလေးမနက်ခင်းဟာနေခြည့် အသံလေးနဲ့ လင်းနေကြ…။ကျနော် ဆွ ...
ဝင်းဌေးဦး – မအိပ်ပဲစောင့်နေတဲ့ည
.အေးစက်တဲ့လေတွေနဲ့ အသက်ရှူနေရတာညဟာ မအိပ်ချင်သူဖြစ်နေရဲ့။သူ- - - -ထွက်သွားတာကြာနေပေါ့ညဟာလမသာလဲ အိပ်မယ့်ညမဟုတ်သလိုငါ ကိုယ်၌က ညလိုဖြစ်နေတာ။ညရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကည တိမ်တွေအောက်သီချင်းဖွဲ့နေတဲ့ အလင်္ကာဆရာလိုမှောင်ရိပ်ရဲ့အကူအညီမှာ ညနက်လေ အိုစာလာလေဂီတဆန်ေ ...
လူလေး – လင်းသက်ငြိမ်
Posted by: လင်းသက်ငြိမ်
.လူလေးလူလေးဟာ မပေါ့ဘူးမပေါ့တဲ့ လူလေးရဲ့ မျက်နှာဟာ အဆီတွေပြန်လို့အဆီပြန်နေတဲ့ မျက်နှာဟာ ညိုညစ်ညစ်ပြုံးလို့ညိုညစ်ညစ်အပြုံးဟာ ညှော်နံ့တွေထွက်လို့ညှော်နံ့တွေဟာ ပိုက်ဆံအိတ်ကြီး ချိုင်းကြားညှပ်လို့ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးဟာ ငိုသံတွေကို ဖုံးအုပ်လို့ငိုသံတွေဟာ ပ ...
တိုးနှောင်မိုး – ပျားတွေ သေနတ်ပစ်ခံရတယ်
Posted by: တိုးနှောင်မိုး
နီလာဟာကျောက်စိမ်းတောထဲက ထွက်လာတဲ့ သီချင်းကျွန်းသစ်လည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့တင်ရင်နှစ်တုံးတော့ ပါတယ်။လာမမေးနဲ့ စာအုပ်တွေဟာ ကွမ်းယာထုပ်မလားလက်ဘက်ခြောက်ထုပ်မလားဒါပဲသိ။တောထဲ ခွန်နှစ်ခေါက်သွားရင်ဆိုင်ကယ် အင်ဂျင်ကိုင်မယ်ငွေလေး ဆယ်သိန်းလောက်ကိုင်မိမယ်မယုံရင် စ ...
နေလွဏ်းအိမ် – ဆယ်လ်မွန်ငါး
.အနိဋ္ဌာရုံ​အားလုံးကပတ်​ဝန်းကျင်​တ​ခုလုံးကို ရိုက်​ခွဲလိုက်​တယ်​လူကူးမျဉ်းကြား​ပေါ်က တ​ပိုင်းတ​စ ​နေ့ရက်​များမီးစိမ်းခဲ့တာ​တောင်​ နီရဲ​နေတဲ့ လမ်း​တွေဟာ​ရေလှိုင်းတ​ခုလို သွားလာ​နေကြလ​ရောင်​​ပျောက်​ ဧည့်​ခန်းထဲမှာအုပ်​စုဖွဲ့ ဝံပု​လွေ​တွေ ​ဆေးမင် ...
မောင်တင်သစ် – မဇအ သို့
.မင်း ဘာကို ရှာဖွေခဲ့သလဲမင်း ဘာကို တွေ့ရှိခဲ့သလဲ.နှင်းမြူ ထဲ အငွေ့ပျံသလိုမင်း ထွက်ခွာသွားပုံကငါ့ မျက်စိတဆုံး။လူဖြစ်မှတော့သေဖို့သာပြင်ရော့ကြိုးတချောင်းရဲ့အဆုံးအဖြတ်မှာမင်း ကျေနပ်ခဲ့တယ်ကိုယ့်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့။မောင်တင်သစ် ...
စစ်ပွဲပြီးတော့ ရှင်ကွဲတွေကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပုံပြင်မဟုတ်ဘူး – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.အဖေကနေရပ်စွန့်ခွာသွားတဲ့ရွယ်တူညီအကိုတွေအကြောင်းလွမ်းလွမ်း ဆွတ်ဆွတ်ပြောတယ်။အမေကမြို့တက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ သမီးနဲ့.နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဝင်ငွေရှာနေတဲ့သားအကြောင်းကို တခုတ်တရ ပြောတယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ ခြေတဖက် ဆာမှုမှာသိမ်ငယ်မှုတွေ့ အပြည့်ခြေတဖက် အဖြတ်ခံလို ...
ညီဇော်ချစ် – နွေနှစ်ထပ်ဝတ်စုံနဲ့ မိုက်ကယ်
.အတွင်းတထပ် အပြင်တထပ်နဲ့ရေခဲချောင်းသည်မလေးသူ ရောင်းတာ မိုက်ကယ် ရေခဲချောင်းမို့မိုက်ကယ် လာဦးလို့ ခေါ်ကြတယ်သာကူ ဒူးရင်း နာနတ် အုန်းပေါင်း.နို့မလိုင် စတော်ဘယ်ရီမြားတစင်းလို နွေကိုဖောက်ထွက်ပြီး.နှလုံးသားဆီ ဒုတ်ဒုတ်ထိ စိုက်ဝင်လာတဲ့မိုက်ကယ်ရဲ့ အသံရေခဲ ...
ဧညိမ်းဝေ – စံပြရွာသား
.စံပြစရာရှားတဲ့ အလုပ်အကိုင်ကကျေးလက်ကိုချိုင်းထောက်နဲ့ကြွလာတယ်အနေအထိုင်မတတ်တာနဲ့အာသီသက ကြမ်းဆူးပြီးသားပဲအချည်စူးနေတဲ့ခံတွင်းကရေဆာသလို ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ရတောင့်ရခဲဘဝက အစီခံအထိနေတဲ့မညိုဝင်းဆေးပေါလိပ်တိုလိုလောကဓံကိုပြန်ခဲဖို့အာခံတွင်းထိအောင် ရဲရဲတေ ...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ – ပျော်ပွဲစားထွက်သူဟာ မရှိတော့ဘူး
.ဖြစ်ချင်တာဟာတိမ်တိုက်တွေဖြစ်သွားကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်တတ်ကြတယ်။သဲများဟာကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲကြီးများမှဆင်းလာကြရာကြီးမားသောလူဖြစ်မှုထဲကအစက်ငယ်ကလေး။ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ္စမတ်ညတွေဟာဆပ်ပြာ နှစ်ဆယ်ရေအဆ တရာထဲကအမြုပ်ကလေးများလိုကြွတက်ခဲ့အော် အချို့သောအတိတ်မျာ ...
.ဘူးသီး​ကြော်​ကြိုက်​သူ​တွေကို​ပေါက်​စီ​ကျွေးမယ်​လမုန့်​ကြိုက်​သူ​တွေကိုအမဲသား​နှပ်​ကျွေးမယ်​အစိမ်း​ရောင်​ကြိုက်​သူ​တွေကိုအသီးအရွက်​​ကျွေးမယ်​​ပေါက်​စီလုပ်​နည်းသင်​မယ်​အမဲဖျက်​ ​လေ့ကျင့်​မယ်​အသီးအရွက်​​တွေစိုက်​မယ်​ပြီး ...သူတို့​တွေထွက်​မ​ပြေ ...
တံတားဖြူတမ်းချင်း – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.၁၉၈၂မြန်​မာပြည်​ရန်​ကုန်​မြို့ကမာရွတ်​ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်​အင်းလျားပြည်​လမ်းမကြီး​ခြောက်​မိုင်​ခွဲ ဝိုင်​ယာလက်​စ်​လူငယ်​ ​လေး​ယောက်​ဂစ်​တာ နှစ်​လက်​သီချင်းတပုဒ်​။ရုန်းမှ ​ထွေးခိုင်​မြဲတဲ့ကြိုးအစကို ဘယ်​သူစ ဆွဲလိုက်​တာလဲငါလားမင်းလား။ဒါကိုစ ...
ဖျားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းလေး – အောင်နိုင်
Posted by: အောင်မော်ဦး (Web Design)
.ဖျားတဲ့မဂ္ဂဇင်းလေးတနေ့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ မဂ္ဂဇင်းတအုပ်ကိုင်ကြည့် လှန်လိုက်မိသည်။ ဇာတ်လမ်းမျိုးစုံ တင်ပြပုံကို ရသစုံဖြင့် ခံစားမိ၍ ရင်မှာပီတိကြည်နူးမိစဉ်ခေတ်ကိုထင်ဟပ် ကဗျာတွေဖတ်တော့ခေတ်ကိုဖော်ညွှန်း ကာတွန်းတွေဖတ်တော့ခေတ်ကို ပမာပြု ၀တ္ထုတွေဖတ်တော့ခေ ...
ချစ်သူအတွက်ကဗျာ – မာန်လက်
Posted by: နရီမင်း
.အချစ်ရေ ကမ္ဘာပျက်ခါနီးမှ လူလာဖြစ်ရသလို ငါတို့ရဲ့ဘ၀ အများကြီး နောက်ကျနေခဲ့ပြီကွယ်။ ငါတို့ဟာ ငါတို့ရဲ့ ချွေးနဲ့သွေးတွေက ချက်ယူပြောင်းလဲထားရတဲ့ ထမင်းတနပ်ကိုတောင်မှ စိတ်ချလက်ချ စားခွင့်မရနိုင်တဲ့အချိန်၊ ငါတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မြေတနေရာထက်မှာမှြ ...
ယောဟန်အောင် – ဆောင်းမီးဖို
.မီးခိုးဗုံးကွဲသလို ညမှောင်မဲ ပျော်ဝင် ရုတ်တရက် ရှင်သန်ခုန်ချလာ.နှင်းမှန်ကွဲစလဲပါ။ ကျွန်တော်ဟာ တဲတခုမှာ ဘာမှရှောင်လွှဲမရလို့ ညခိုဖို့ပြင်နေရင်း မီးလင်းဖိုကို ထင်းထည့်တယ်။ ရဲဘော်တဦးလေ တပ်ဦးဝတ်စုံမှာယုံကြည်ချက်နဲ့ ဘက်တံဆိပ် အပ်ချည်နဲ့ သီကပ်နေတယ်။ရဲ ...
မိုးသီးဇွန် –အရုဏ်ဦး ကြယ်
Posted by: မိုးသီးဇွန်
အရုဏ်ဦး ကြယ် ညရဲ့ဒုက္ခနဲ့ သောကတွေကိုငါ ဖြတ်ကျော်ပြီးရင် သင်နှင့်အတူ ချီတက်မယ် တကမ္ဘာလုံးက မနက်ခင်းတွေဆီ။ မိုးသီးဇွန်၁၉၉၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃(လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကာလ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှာလက်ရေးနဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့ကြတဲ့“မတ်လရဲဘော်-ကဗျာစု”စာအုပ်မှ)ကျေးဇူးစက ...
စံညိမ်းဦး – ရာဇဝင် ကျိန်စာ
.တံတားနီနီအင်းလျားနီနီကံ့ကော်ပန်း နီနီ နဲ့ကျောင်းသားသွေး နီနီခင်ဗျားတို့ ဒူးကလေးနှံ့လို့ဟားတိုက် လှောင်ရီနိုင်ရက်လေမလား။ထုံးဖြူသုတ်လို့ မဖြူတော့တဲ့ တံတားနှစ်တွေလိမ်းလို့ မစိမ်းတော့တဲ့ ရေပြင်လတွေ လူးလို့ မဖြူတော့တဲ့ ကံ့ကော်အာဏာဖိလို့ ဖျော့မသွားတ ...
သမိုင်း – နေဇော်နိုင်
.ငါတို့ မွေးတော့ သမိုင်းဟာရိုင်းသွားတယ်လို့ ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့ ဟုတ်တာပဲ ချိုမြတင်၆၅ နောက်ပိုင်း သမိုင်းဆိုတာရှဲဒိုးသမားတွေ ထမင်းချက်တဲ့သေတမ်းစာရွက် ဖြစ်သွားတယ်.နှစ်ယောက်တဖွဲ့ နဲ့ တယောက်တလှည့်ဥက္ကဋ္ဌတင်တဲ့လူရွှင်တော်ပြက်လုံး ဖြစ်သွားတယ်စာလုံးမည်းမည ...
မောင်လွမ်းဏီ – တံတားနီ
ဤ တံတား၌ကျောင်းသားတယောက်လူပျောက်ကြော်ငြာနေပါသည်။ကျောင်းသူလေးတွေရေစိုနစ်ရွှဲ၊ အဖော်ကွဲကျန်ကန်ဘောင်ရိုးက ပန်းကြွေတချို့။ဖြူသလားနီသလားဤတံတားပြည်သူများမှာနားနဲ့ မျက်စေ့ ရှိပါသည်။ ။မောင်လွမ်းဏီ၁၄ - ၃ - ၁၉၈၉။ ...
ဒဂုန်တာရာ – မတ်လတော်လှန်ရေး
.မိုးကုပ်ကုပ်ဝယ်အို- ရုတ်တရက်၊ မျဉ်းဖြူစက်၍ကွဲအက်ကြောင်းရာ၊ ဟ ဟ လာပြီးမိုးပြာကိုဖြတ်၊ ပတ္တမြားရည်စီးလည်အဟုန်၊ နီမြန်းကုန်သည်အရုဏ်ပေါ်စ ဝိုးတဝါး။မှုန်မွှားမွှားလျှင်ဝိုးဝါးတိတ်ဆိတ်၊ ကြယ်ရောင်ရိပ်ဝယ်မြစ်ဆိပ်နှင့်လည်း၊ မနီးမဝေးချောင်းရိုးဘေးမှ၊ ဖြေးဖြေး ...
အေအိုင်ဒီအက်စ် – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.အဖေကသွေးသင့်တဲ့ ဓားကို မသွေးဘူးမသွေးသင့်တဲ့ ဓားကို သွေးတယ်။အဖေ ခုတ်ရမှာကဒုက္ခပေးနေတဲ့ ကျားဆိုးကြီးအဖေ ခုတ်လိုက်တာကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ယုန်သူငယ်မလေး။မိုးရွာထဲထွက်ရင်ထီးဆောင်းဖို့ အမြဲပြောတဲ့အဖေကမိုးရွာထဲထွက်တာဘာလို့ ထီးမဆောင်းရတာလဲ။အဖေ့ ဘဝအင်္ကျီမှာပေနေတ ...
ကမ်လူဝေး – ခပ်ပိန်းပိန်းတွေကြားက နေရာ
.သူ​တောင်းစားဟာ​နေ့စဉ်​ အချိန်​မှန်​မှန်​ သူ့​နေရာကို​ရောက်​လာသူဘယ်​ကလာသလဲဘယ်​သူကမှ မ​မေးစမ်းကြ။​နောင်​ဘဝ ​ကောင်းရာ​ကောင်း​ကြောင်းကုသိုလ်​အကျိုး ​မျှော်​လို့ လှူတဲ့သူအိမ်​က ထမင်းအိုး မကျက်​​သေးဘူး။ဘုရားသခင်​ရဲ့ ​ကောင်းချီးမင်္ဂလာ​တွေဟာ​ဝေငှ ...
ဉာဏ​ကျော်​ – အာလူးဖုတ်တွေ
.လက်​ရှိ ကျ​နော့်​ရဲ့ လူရာဝင်​မှုကတဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာလိုက်​တာအာလူးဖုတ်​စားပြီး ​တောင့်​ခံထားရတယ်​ ​အာလူးဖုတ်စားပြီး လူ​တောတိုးရတယ်​။မိုးလင်းမိုးချုပ်​ စားလိုက်​ရတဲ့ အာလူးဖုတ်​​တွေမမုန်းနိုင်​ဘူး မ​မေ့နိုင်​ဘူး​လေ။တခါတ​လေ ကိုယ့်​ဘာသာ ဖုတ်​စာ ...
မောင်ရဲနွေ(ပလိပ်) – မင်းကိုပြောမယ် သူငယ်ချင်း
.သူငယ်ချင်းမင်းနဲ့ စကားပြောမယ်…။မင်းပညာပေးတယ်ငါပညာရတယ်..။လိုရင် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်မလိုရင် ကျောခိုင်းတယ်…။လိုရင် မိတ်ဆွေ စစ်တယ်မလိုရင် ပြစ်တင်မယ်…။လိုရင် ပြုံးပြတယ်မလိုရင် မုန်းကြမယ်…။ဒါ လူ့သဘာဝလားလူ့မာနလား…။ဟုတ်ပြီ … သူငယ်ချင်းငါ့ အကြောင်းလည်း မ ...
မြေနုကျွန်း – ကိုသက်အောင်
Posted by: ကိုသက်အောင်
.ဘယ်မှ မသွားဘဲခဏခဏ လမ်းမှားတယ်ကိုယ့်အမှတ်အသားနဲ့ကိုယ်မေ့လျော့ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ထိုးမြဲလက်မှတ်တွေဟာငါ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူလဲ ဒါတွေ တကယ်မဖြစ်ခဲ့သလိုဒါတွေ တကယ်ဖြစ်ခဲ့သလိုဆောင်းဟာ.နွေဘူတာကနေ တဖြည်းဖြည်းထွက်ခွာသွားပန်းချီကားထဲလွင့်နေတဲ့ သစ်ရွက်အကြွေတေ ...
ဆယ့်ကိုးလမ်း – တီကျူး
.​မြေပုံထဲမှာ ရှာမရတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်​ရပ်​က အမည်​နဲ့မြို့လမ်းကြားထဲ ဇက်​တဆုံး ​မော့ကြည့်​မိရာလ​ရောင်​ကို မမြင်​ရမီးပုံးနီနီ​တွေ ရဲရဲနီ​အောင်​ ပွင့်​​နေကြ​ပေါ့။နှစ်​​ထောင့်​ဆယ့်​ရှစ်​ လည်​ဆွဲနဲ့​ခွေးရုပ်​က​လေးကို​ တွေ့ရသလို​ဘေးခွဲ ခွဲထားတဲ့ အနီ​ရောင်​ ...
ဇော်ရေးထင် – ငါတို့နိုင်ငံရေး
.သစ်ရွက်လှုပ်တိုင်းရီခဲ့ပြီးပြီ။ရော့ ...အမှိုက်တောင်း ကိုင်သစ်ရွက်တွေ ကြွေတဲ့ရာသီ။သစ်ရွက်ကြွေ မြင်ရင်တံမြက်စည်း ကိုင်ရမယ်။အမှိုက်က စ ဘာညာစကားပမာ ရှိ မဟုတ်လား။ဟို တယောက်ပြောသလိုကိုယ့်နိုင်ငံ ဆိုသဟာကကိုယ်ရေးသလို ထင်တာမျိုး။ခေတ် သားကပြောတယ်အဖေ နေကော ...
“ဖုန်းမော်” – အေအမ်တီ
.မတ် - ၁၃ဒါ ပန်းတပွင့်ကြွေတာမဟုတ်မြေကြီးကို အသက်နဲ့ ပုတ်နှိုးခဲ့လေသူ.နွေဦးမှ မြားဦးသို့ ပန်းတို့တောက်ခတ် ပြေးထွက်လာခဲ့လာမယ့် နွေဦး သစ်တိုင်းအစောဆုံး ပွင့်တဲ့ စွယ်တော်ဖုန်းမော် ဖြစ်ပစေ။အေအမ်တီ ၂၀၀၇ ...
မောင်လွမ်းဏီ – “လက်ပံ”
.ရုပ်တု ခေတ်ဆိုတော့အသစ်တွေသာ.နွေဦး။ကြွေ ဝဲ ဖူး တဲ့ လက်ရာကွန်ဂရစ်မှာ လက်ဗွေချရုပ်တုဘ၀နဲ့ စိုက်ထူရလေမလားပဲ။စစ် အကြွင်းအကျန်ဗုံးကျည်ခွံကဘုရားစဉ်ထက် ပန်းအိုးစစ်မြေပြင်မှာ အရိုးအိုး။သမိုင်းက တသသ ဓားတွေကိုလည်း တဆဆ။တရားသဘောပါပြေးရင်းလွှားရင်းတွေ့တာလှံသ ...
စံညိမ်းဦး – “၁၉ ၈၈ မတ် ၁၃”
.လောင်စာအပြည့်နဲ့အဆောက်အုံဆိုးအတွက်သမိုင်းဝင် မီးတခြစ်မျှဒါပေမယ့်သစ္စာမီးတောက်ကြီး တခုလုံးအတွက်ကြီးမြတ်သော ပါရမီဖြည့်ကျင့် ပေးဆပ်မှု။ငါတို့ ကျောင်းသားအရိုးတွေ တောင်လိုပုံခဲ့ငါတို့ ကျောင်းသားသွေးတွေ မြစ်လိုစီးခဲ့ဒီတိုင်းပြည်ခရီးခွပ်ဒေါင်းသရဏံ ဂစ္ဆာမ ...
ရန်နည် – မျိုးတိုးမျက်တက်ပဲ
.ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ကတော့တောမှောက်တာလားတောခြောက်တာလား မသိ" ယုန်တောင်ပြေး ခွေးမြောက်လိုက်ပိုက်တန်းသူ အရှေ့ဝေ့ - -ခြောက်သူ အနောက် " ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ် ဆိုပေမယ့်စရိုက်တွေက မပီပြင်လှေငယ် လောက်လက် အကူးခက်ပါတယ်ဆိုမှအချို့က လှေနံ နှစ်ဖက်န ...
ရွာထဲကအိမ်ကလေး – ဟာရှိန်း(မင်းတပ်)
.တနယ်လုံး လေးစားရတဲ့ ရွာကလေးရွာကလေးထဲမှာ အိမ်အိုလေးတလုံးရှိအဲဒီ အိမ်ကလေးဟာ တောင်တန်းတွေကို ထမ်းပိုးခဲ့တောလမ်းတွေကို ထမ်းတင်ခဲ့ရာဇဝင်နဲ့ချီရင် ရာဇဝင်တွင်သမိုင်းနဲ့ချီရင် သမိုင်းဝင်ဒါပေမယ့် အိမ်ကလေးထဲမှာရိုးဖြောင့်တည်ကြည်မှုက လွဲဘာဆုတံဆိပ်မှ ချိတ် ...
မိုကျော်ဌေး – အရေးပေါ်လူငယ်
.အရွယ်​မတိုင်​ခင်​ အာ​ခေါင်​ခြစ်​ ပွင့်​ခဲ့ရတဲ့ ပန်း​တေလေတွေပါ…​ကြွေချိန်​မတန်​လဲ ​​မောင်းတ​ချက်​မဖြုတ်​ခင်​အလိုက်​သင့်​​ကြွေ​ပေးခဲ့ကြရ ၊အာဏာရှင်​ဆိုတာတသား​မွေးရင်​ ​တ​သွေးလှရတယ်​​မဟုတ်​လား…ဒါဟာ…ဦးတည်​ချက်​ကြီး အရပ်​ရပ်​တို့ရဲ့ အနှစ်​ချုပ်​လည် ...
မောင်ကြူးရင့် – သွေးစွန်းနေတဲ့ ကင်းဘတ်
Posted by: မောင်ကြူးရင့်
.ဗင်ဂိုး ပန်းချီကားကိုဘယ် ဆေးရောင်ဘယ် စုတ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုပဲ ဆွဲဆွဲအစစ် ဖြစ်မလာဘူးအတုဟာ အတုပဲအရိပ်ကို ဖျက်လို့ရတယ်အတိတ်ကို ဖျက်လို့မရဘူးငါတို့ အရပ်မှာဟစ်တလာဟာခုထိ အသက်ရှင်တုန်းပဲ။မောင်ကြူးရင့် ၁၆့  ၂့  ၂၀၁၈ ...
စွန်လွှတ်သူ – အောင်သာငယ်
.စမ်းချောင်းလေး တစင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်…ငါ့ ဆံပင်တွေ ရှည်လာတာပဲ အဖတ်တင်တယ်…ပင်လယ်ကမ်းခြေက အုန်းပင်လေး တပင်ကို မနာလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ငါ့ “လ” ကလေးကို ပုခုံးထက်မှာ ငါလည်း တင်ထားချင်တာပေါ့…ဟော့သည့် ကြယ်ငါးကလေးကို ပင်လယ်ထဲ ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်…ငါ့ စူဠလိပ်ကလေ ...
ဆက်အောင်နိုင် – ငါတို့ ထိမှန်သွားသောနေ့များ
Posted by: ဆက်အောင်နိုင်
.ဒီလို ညီမလေးရေ ...အမှန်တရားအတွက် ... တဲ့အဆိပ်ကို အဆိပ်မှန်းသိလျက်နဲ့ မက်မက်မောမော မျိုချခဲ့တဲ့ပညာရှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းဖတ်ရှုခဲ့ဖူးတယ်ကွဲ့ညီမလေးရော ဖတ်ဖူးရဲ့လားမသိ။ပြီးတော့...သစ္စာတရားအတွက်...တဲ့သေခြင်းကို သေခြင်းမှန်းသိသိချည်းဝံ့ဝံ့စားစားနဲ့ ခံယူခဲ ...
မင်းချောမြင့် – ပြောကြည့်
Posted by: မင်းချောမြင့်
.နံနက်ခင်းမို့ပါတဲ့နံနက်ခင်းတွေက ဆင်ခြေပေးသွားကြပါသတဲ့ယခုတလောကြားနေရသော ယုံကြည်မှု သတင်းရင်းမြစ်များအရ ဒီသတင်းက အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်း ကြေငြာသွားပြီ။နံရံပေါ်မှာ မှားတယ်လို့ ငါ ရေးတယ်ငါ့ဘေးက နံရံတွေမှာ ရေးထားတယ် ငါ့ဘက်က ကြည့်နေေ ...
ဝေယု – ဒီနွေဦးမှာ
.ဒီနွေဦးမှာသရက်ကင်းဖူးလေးတွေနဲ့ငါနဲ့နီးနီးလေးပဲ။ကျောင်းပိတ်သွားတဲ့ကလေး လေးတွေနဲ့ ငါနဲ့နီးနီးလေးပဲ။ပျော်ရာပျော်ကြောင်း ရှာလို့ရတယ်အေးရာအေးကြောင်းတော့ ရှာလို့မရသေးဂျာဆိုင်းအိမ်ရေ။မြင်ရဲ့ မဟုတ်လားကြောက်လန့်နေဆဲ မျက်လုံးတွေအံကြိတ်ထားဆဲ မေးရိုးတွေ။နှ ...
ရေသံ – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.ဖွင့်ထားတဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းမှာရေရဲ့ ငိုသံ။တောင်ကျချောင်းမှာရေရဲ့ အော်သံ။စမ်းချောင်းထဲမှာရေရဲ့ သီချင်းဆိုသံ။ရေတံခွန်ပေါ်မှာရေရဲ့ ရယ်သံ။ကမ်းစပ်မှာရေရဲ့ အနမ်းသံ။ဆုတ်ခွာနေတဲ့ ဒီရေမှာရေရဲ့ အလွမ်းသံ။စိုးနောင်(မုံရွာ) ...
ဖက်ဒရယ်အတွေး – နေထက်နိုင်
.ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်ပါပဲ။မင်းဝင့်ရဲရင်နေအရောင်နဲ့ ပွင့်နေတဲ့ပန်းတွေကို ငေးကြည့်လိုက်။ဥသြငှက်မြည်တွန်တောက်တီးတဲ့အသံတွေနဲ့ယက်လုပ်ထားတဲ့ မြို့ရေအလွမ်းမီးတွေမိုးမကျခင် ငြှိမ်းသတ်ထားလိုက်။ဖြစ်နိုင်တဲ့အိပ်မက်တွေ မက်ပါ။အဲဒီ့ အိပ်မက်တွေဖူးပါစေ ပွင့်ပါစေ ...
ခက်သီ – စိမ်းလန်းကမ္ဘာ
.စိတ်ကူးကောင်းသူအဖို့တက်တူးထိုးခြင်းဟာတဘဝစာ စိတ်အာသာဖြေမှုဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးစိတ်သန်း မရှိသူအဖို့တက်တူးထိုးခြင်းဟာမိုက်မဲ ရာကျပါတယ်။တက်တူးထိုးခြင်းဖြင့်မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမင်း တသသ ပြန်ကြည့်နေနိုင်သလိုတက်တူးမရှိတဲ့ အရေပြားပေါ်ကအဆုံးတိုင် လွတ်မြောက်မှုကိ ...
ငါတို့ဟာ သစ်ခုတ်သမားများသာ – ခင်မင်းဇော်
Posted by: ခင်မင်းဇော်
.ဟောဒီမှာ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်အတွင်း ယူသွားကြပါ ငါတို့ရဲ့ နုပျိုခြင်းတွေယူသွားကြပါ ငါတို့ရဲ့ အိပ်မက်ပျိုတွေယူသွားကြပါ ငါတို့ရဲ့ အနာဂတ်တွေယူသွားကြပါ ငါတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေယူသွားကြပါ ငါတို့ရဲ့ သွေးရင်းသားရင်း ချစ်ခြင်းတရားတွေယူသွားကြပါ ငါတို့ရဲ့ ...
​ခေတ္တခဏ အခိုက်​အတန့်​ -အောင်ကိုကိုလတ်(တမူး)
Posted by: အောင်ကိုကိုလတ် (တမူး)
.အသံပိတ်​ပြီး MTV ကြည့်​ရသလိုကျွန်​တော့်​မျက်​လုံးထဲက ခုန်​​နေတယ်​မျက်​စိမှိတ်​ပြီး ကာတွန်းစာအုပ်​ဖတ်​ရသလိုကျွန်​​တော့်​နားထဲ ရယ်​​မော​နေတယ်​​သေနတ်​ကိုင်​ထားတဲ့ အကြမ်းဖက်​သမား​ရှေ့မှာလက်​​မြှောက်​ပြီး ​တောင်းပန်​​နေတဲ့ ဓာတ်​ပုံမျက်​နှာဖုံးစွပ ...
ငါ့နောက်က ရုပ်ရှင် – ပိုင်စိုးဦး
.စမ်း​နေတဲ့လက်​သံက​ချောကလက်​​တွေ ထွက်​ကျလာတယ်​မာဆယ်​ဒူးရွှန့်​ရဲ့ အနုပညာပစ္စည်းကအ​တွေးအ​ခေါ်အယူအဆများကိုဇာစ်​ကြိုး ဖွင့်​​ပေးလိုက်​တယ်​အစစ်​အမှန်​အတွက်​ ​နေရာမရှိ​တော့​အောင်​​ရွှေ့ ​နေတဲ့ဖြစ်​စဉ်​...အမှိုက်​က ​ရွှေဖြစ်​တယ်​အမှိုက်​က ပြဿဒ်​မီး​လောင်​တ ...